Umyeni wam uyafudumala Ibhedi Isahluko 1461 - 1480 UkuFunda simahla kwi-Intanethi | XperimentalHamid
Umyeni wam uyafudumala Ibhedi Isahluko 1461 - 1480 UkuFunda simahla kwi-Intanethi
Funda incwadi yasimahla yePDF Umyeni wam ufudumeza ibhedi nguKevin Kyle okanye uKaren Daly simahla kwisahluko 1461 - 1480, pdf online.
Ungalibali ukubhalisela uhlaziyo ngakumbi;
Isahluko 1 - 10
Isahluko 1441 - 1460
Sincede ekuziseni umxholo omangalisayo
Indoda yaqhwatywa ngempama. Impendulo yokuqala yayikukulwa. Uphakamise isandla wasisa ku Lu Xifan. U Lu Xi ukhabe umlenze wakhe wawukhaba emlenzeni wendoda. Indoda yafumana enye ukukhaba. Ubaleke ngomsindo waya kuLu Xi. U-Lu Xi khange akwazi ukuzifihla. Wafika kule ndoda yambamba ebusweni. Wakrwela amanqaku aliqela egazi.
“Bhuti, ufuna ukubhubha!” Indoda ibalekele eLu Xi. U-Lu Xi wayesazi ukuba akanakumbetha. Kwangoko wacela uncedo kubantu abadlulayo. Ngethamsanqa, kweli hlabathi, baninzi abantu abaneentliziyo ezishushu, kwaye kwangoko wamrhawula. "Wenza ntoni? Wenza ntoni? "
Indoda ifuna ukubamba uLucy ukuze akhuphe umoya wakhe onogonyamelo, kwaye akakwazi ukulawula abantu abamngqongileyo.
U-Lu Xi uthathe ithuba wathi, “le ndoda ifuna ukuphanga ibhegi yam. Ndicela undincede ndibize amapolisa. ”
Ababukeleyo babejikelezwe ngoomakazi ababini abakhulu, abangathethi nto kwaye bayanga le ndoda: "ntombazana, ukujongana nolu hlobo lwenkohlakalo, qala ubethe uze ubize amapolisa."
U-Lu Xi ucinga ukuba sisizathu esinye. Xa oomakazi ababini bebambe le ndoda ezingalweni zayo, iyaphakamisa iinyawo zayo ikhaba iinyawo zendoda: “nyana wenja, ndifuna ukuba uphange ibhegi yabafazi abangatshatanga! Uyandibulala! "
Nangona ezi nyawo zimbini zincinci kakhulu kunokwenzakala kwakhe kuLucy, kodwa uLucy uziva ukuba unokuphefumla kwakhona.
Oomakazi ababini nabo batsala iinwele zendoda, babamba ubuso bendoda: “irhamncwa, musa ukukunika ibala ukuze ubone, ucinga ukuba thina bafazi siyakwazi ukuxhaphaza. Unentliziyo yokuphanga intombazana entle kangaka. Ngaba unemvelo yomntu? "U-Lu Xi wongeze wathi:" ukuba ebenobuntu, ngekhe andiphange. Enkosi ngenkalipho yakho, makazi. Ngaphandle kwakho, andizukuphanga kuphela namhlanje, kodwa mhlawumbi uninzi lwabasetyhini abafana nathi belunokuphangwa. Uluntu lwethu lufutshane nabantu abanesibindi njengo-anti wakho. "
Umakazi waphakamisa isandla waqhwaba indoda ebusweni: “Zizinto ezingenabuntu, namhlanje sizokwazisa ukuba banamandla kangakanani abafazi bethu. Ungaze ubaphange kamva. ”
Ukubona ukuba amadoda abethwe ade ayokufa, u-Lu Xi ucinga ukuba abafazi bayoyikeka ngaphandle kwamadoda.
Xa bakreqayo kwaye bebetha, iindlela ezininzi ngakumbi zabajikeleza. Bayabetha kwaye bayabetha. Abanye bathatha iiselfowuni zabo babiza amapolisa.
Kule mfazwe, uLu Xi kunye nendoda basiwa kwisikhululo samapolisa. Oomama ababini abanobubele kunye noomama abaliqela balandela kwisikhululo samapolisa, besithi uLu Xi makabe lingqina.
Kwakukho amangqina. Indoda ebethetha. U-Lu Xi wamthumela ngempumelelo kwisikhululo samapolisa.
Emva kokuphuma kwisikhululo samapolisa, u-Lu Xi wabulela kubo bonke abantu abangabazi ngenkalipho yabo kwaye wafumana igqwetha uYang okokuqala. Uthathe umkhondo wegazi oshiye kubhontsi wobuso bendoda ekrwelekileyo wayithelekisa neDNA kaLu Lu: “Gqwetha Yang, ndiza kukuphazamisa ngeli xesha.”
Igqwetha uYang lithe: “Lu Xi, buyela emva ulinde iindaba. Ukuba umdlalo we-DNA uphumelele, awunako ukunyanga ukuphanga kwale ndoda, kodwa nokudlwengulwa kwale ndoda. Xa kuyakubakho ubugebenga obuninzi, andicingi ukuba uyakuphuma ejele ubomi bakhe bonke. "
U-Lu Xi wanqwala, "Ndiyathemba njalo."
Ngokukodwa kuluvuyo lukaLucy, ngoku le ndoda ibanjiwe ngamapolisa, ayizukukhathazeka malunga nokubaleka kwayo kude kuphume ingxelo yovavanyo lwe-DNA.
Lixesha lasemva kwemini ukubuyela kwinkampani emva kokugqiba yonke into. Ukufika nje kukaLu Xi, wamiswa ngu-antinger: "Lu Xi, uQin ebehlala ekucela ukuba uye eofisini yakhe."
Intliziyo kaLu Xi ngequbuliso yathi, “uQin uhlala efuna ntoni kum?”
“Ungandixelela njani umongameli uQin ukuba ndikukhangele?” watsho u antinger. Khawuleza, Mnumzana Qin kudala ekulindile. "
U-Lu Xi wanqwala, "Kulungile."
U Lu Xi ufike e ofisini kaQin Yingu, waphefumlela phezulu watsho nje enkqonkqoza eofisini kaQin Yingu. Uve abantu abangaphakathi besithi ngena. Utyhale nje ucango wangena: “Mongameli Qin, uyandikhangela?”
U-Qin Yin wabeka phantsi umsebenzi wakhe okokuqala, wajonga phezulu wathi, "wenze ntoni kusasa?"
"Khathalela ishishini lomntu elincinci," utshilo uLucy
UQin Yin wafinga: "yiza apha kancinci."
ULucy wathobela wasondela kuye: “yintoni ingxaki?”
U-Qin Yin uvula iselfowuni yakhe ajike ajonge umxholo okwi-Intanethi: "jonga le."
U-Lu Xi uthathe umnxeba obonakalayo kwaye wabona ukuba inqaku lokuqala elishushu kuWebibo babenomdla oomncinci basebenza kunye ukubamba abaphangi.
Isihloko siyayibaxa inkqubo yokubanjwa kukaLu Xi. Ikwachaza nendlela aligorha ngayo umakazi odlulayo kunye nokuba bangaphi imifanekiso abasebenza kunye kuyo ukuze boyise abaphangi.
U-Lu Xi uhleka kakubi: “yingozi nje encinci eyenzekileyo kwinkqubo yokujongana nemicimbi. Ngoku iphethwe kwaye ayizukuchaphazela umsebenzi. Qiniseka, Mnu. Qiniseka. ”
UQin Yinjian lelinye iliso lokukhetha: "Ndixhalabile yile nto yokuba uza kuwuchaphazela na umsebenzi?"
Lu Xi: “ithini into exhalabisayo? Mandingachazi ukuba yeyiphi inkampani endisebenza kuyo, ayinakuchaphazela igama lenkampani
UQin Yinjian: "Ndixhalabile malunga nokuba wonzakele."
UQin Yinjian: “Ndiyakucela into, kodwa andifuni ukukucela ukuba ukhulule iimpahla zakho ukuze uzihlole?”
Ngokukhawuleza uLu Xi waphinda amanyathelo amabini: “Ndiyaphila, ungazikhathazi ngoQin. Ukhathazekile. ”
UQin Yinyu: "yiza apha."
Lucy: Ndiyaphila nyani
Akunyanzelekanga ukuba akhulule iimpahla zakhe kwaye ajonge.
Nangona bengakhange bathembeke omnye komnye ixesha elide, le yinkampani yakhe. Bangayenza njani into enjalo.
UQin Yinjian: “ukuba umntu uhlangana nale nto kwixesha elizayo, ukhuseleko lomntu kufuneka lubekwe kwindawo yokuqala. Ukuba akukho bhegi, ungaphinda uthenge. ”
U-Lu Xi wambombozela: “Ingxowa kaDior's Daifei ayibizi mali ininzi. Andingomfazi usisityebi. Andifuni ukuthi hayi. ”
UQin Yinyu: "uthetha ukuthini?"
Emva kwayo yonke loo nto, iseyimali.
Lo mfazi uyithanda kakhulu imali kangangokuba akafuni kufa.
U-X Xi ngononophelo wasuka kuye: “Mongameli uQin, unayo enye into ekufuneka uyenzile? Ukuba akunjalo, ndiza kuphuma kuqala. "
Lucy: ndiye ndaphuma ndaya emsebenzini
Emva kokuhamba kukaLu Xi, uQin Yinjian wakhawuleza wathatha ifowuni yakhe waza wafowunela: “Ukufuna iindaba namhlanje kukuphanga kokuqala. Yenza uluvo loluntu lube lukhulu, kokukhona kukhula ngcono. Amapolisa mabayazi uxinzelelo aze agwebe isigebenga kwangexesha. ”
Umntu okwelinye icala lomgca uthe, "ewe."
U-Qin Yinjian wongeze, "Ndiza kuthumela abantu ababini ukuba bakhusele uLu Xi ngokufihlakeleyo kwixa elizayo. Andifuni kuphinda ndibone into enje isenzeka kuye. ”
Ukuba into enjalo iyenzeka kwakhona, uQin Yinjian uqinisekile ukuba umfazi osisiyatha kaLu Xi uya kuyikhusela ingxowa yakhe. Akacingi ukuba bakhohlakele kangakanani aba baphangi. Unethamsanqa lokuba akonzakalanga namhlanje. Ngexesha elizayo, akazukuba nethamsanqa.
Emva kokubeka umnxeba phantsi, uQin Yinjian wafowunela i-antinger: “uyokuthenga zonke iingxowa zebhanki ezinkulu ezintle nezintle, uzithumele zonke kwaLu Xi. Khumbula, umthengisi kufuneka akulungele ukuthengisa amatikiti amancinci kunye nee-invoice, ukuze akwazi ukuthengisa kamva ngaphandle kokuqhathwa. "
Mnu Qin, kuya kufuneka unike uLu Xi ibhegi ukuba uyithengise. Kungcono umnike imali ngokuthe ngqo
UQin Yin wamjonga engabandi. Khange athethe nelimdaka, kodwa wamazisa: “Mongameli uQin, xa ndingakhange ndithethe le ndiyithethileyo, ndizakuyenza ngoku.” Intliziyo kaQin Yinjian: “sisiyatha somntu! Ngaba ukunika imali kuyafana nokunika iibhegi? "
Ukusuka eofisini kaQin Yingu, intliziyo kaLu Xi igcwele ubumnandi, oko kukuthi, intetho yakhe ethi "isitshixo sokukhathalela ukhuseleko" imnandi kakhulu kunokuthumela imali kwigumbi lakhe, nokuba ufuna imali ngoku.
Okwangoku, uLucy akazi ukuba luhlobo luni lwesaqhwithi esilinde yena.
Uye egumbini lokupheka iti ukuze azenzele ikomityi yeti yeentyatyambo, elungele ukuzihlaziya. Nangona kunjalo, xa ebuyela eofisini, amehlo akhe ajonge kuye, emjonga njenge silo.
“Lucy, akufuneki uchaze le nkampani?” YayinguZhou Qingqing ophume esihlweleni ezobuza uLu Xi. Ujonge emehlweni kaLu Xi wambiza ukuba akanelisekanga, ngokungathi uzakunyathela uLu Xi emhlabeni.
U-Lu Xi wayithiyile imibuzo ephezulu kaZhou Qingqing. Uye wasineka wathi, “Zhou Qingqing, ucinga ungubani? Yintoni endifuna ukuyichaza kuwe? "
UZhou Qingqing uthe: “Lu Xi, andingowakho, kwaye awudingi kundicacisela nto. Kodwa wawungatshatanga xa wawusebenza eShengtian, kodwa akunjalo. Kudala ungatshatanga, kwaye awutshatanga. ”
Ithetha ntoni i-Zhou Qingqing?
Ngaba wayesazi ubukho bomhlaba nomhlaba?
Kodwa ayinakwenzeka. UZhou Qingqing angabazi njani ubukho bomhlaba nomhlaba?
Kanye xa uLu Xi engaqinisekanga ukuba uZhou Qingqing unento ayaziyo, uZhou Qingqing wakhawuleza wanika uLu Xi impendulo elungileyo: “Lu Xi, vula ibhokisi yeposi kawonke-wonke kwaye ujonge. Ndiyathemba ukuba ungazola njengokuba unjalo ngoku emva kokuyifunda. "
Ekhathazekile kukuvezwa kukaLu Lu Lu, uLu Xi wabuyela kwangoko kwindawo yeofisi wavula ibhokisi yeposi yoluntu. Ngokukhawuleza xa kuvulwa ibhokisi yeposi, wabona iifoto ezine, zonke iifoto zakhe noLu Lu Lu esibhedlele kwezi ntsuku ngaphandle kokukhetha.
Ewe kunjalo, ii-imeyile ziyazi nokuba ezi foto zodwa azonelanga ukubonisa ukuba uLucy kunye nenkwenkwana kwiifoto ngunina nomntwana, ke kukho ividiyo encinci eqhotyoshelwe kwi-imeyile. ULu Xi ukhuphe kwaye wabukela ividiyo, kuloo ndawo bancokola ngayo noLu Lu.
U-Lu Lu uyakhala kuMama
Ukubona oku, ndiyoyika ukuba akekho umntu oza kuthandabuza ukuba abukho ubudlelwane bomntwana ongumama phakathi kwakhe noLu Lu.
Ngubani emhlabeni webe imifanekiso kanina nonyana?
Yintoni injongo yokuthumela ezi zixhobo kwinkampani?
Ngenxa yomsindo, isandla sikaLu Xi sasingcangcazela kancinci. Wayesoyika, hayi kuba inkampani yayisazi ukuba unonyana. Into awayeyoyika kukuba uQin Yinjian, owayehleli eofisini kamongameli, wayesazi ukuba uzakumazisa uLu Lu Lu phambi kokuba akulungele ukuvuma kuye.
Ngokuzenzekelayo, uLucy waguqukela kwi-ofisi kamongameli.
Ngeli xesha, kwavela i-Tingjie, eyayikhokela i-oda ka-Qin Yingu yokwenza ushishino, yaphuma nje kwi-ofisi kaQin Yingu. Ngokukhawuleza xa wangena kwindawo yeofisi, wafumanisa ukuba umoya awulunganga. Ujonge wonke umntu wajonga kuLu Xi: “Yintoni ingxaki, Lu Xi? Kweneke ntoni? "
U-Lu Xi akakaphenduli, kwaye u-Zhou Qingqing ukhokela ekutsiba athi: “Enkosi, awazi ukuba umntu othile uthumele i-imeyile engaziwayo kwibhokisi yeposi kawonke-wonke yenkampani yethu, eveza ukuba uLu Xi unonyana ongaphezulu kweminyaka emithathu. Kukho iifoto, zikhona iividiyo, ngokuqinisekileyo ayisiyonyani. "
"Lu, Lu Xi, yinyani le?" Lo mbandela ungaphaya komda onokujongana nawo. Hayi, ayipheleli nje kwinqanaba lakhe, kodwa naye uziva kakubi. Ukuba le nto ithethwa nguZhou Qingqing iyinyani, owokuqala ukuxhoma kufuneka ibe nguye.
U-Lu Lu ngunyana onengqondo nonolwazelelelo. U-Lu Xi akaze azive eneentloni. Endaweni yoko, xa ekhankanya uLu Lu Lu, ubuso bakhe buhlala buveza uncumo olunokufunyanwa ngumama kuphela: “ewe. Ndinonyana nje, yintoni ingxaki? ”Ukuva ukuba uLu Xi uvuma ukuba nonyana, uZhou Qingqing wathi ngebhongo,“ jonga, uyivumile ngokwakhe. Akatshatanga. Ebengatshatanga ixesha elide. Ndicinga ukuba olona xhoba likhulu kwesi siganeko kufuneka ibe ngumongameli uQin, owakhohliswa kukufihla okucocekileyo kwalomfazi emva koko wazimanya naye
E-ofisini, kukho uninzi lokukhwaza kunye nelizwi lokubuza, bonke bebuza uLu Xi njengamaxhoba.
Emehlweni abo, intiyo kaLu Xi ayisiyiyo yokuba enonyana, kodwa kukuba unonyana onokuthi athandwe ngumphathi jikelele uQin, abanokujonga kuye kuphela, nangona eganelwe nguLu Xi ngaphandle kwenkcaso. yabo bonke abantu.
Maninzi amabhinqa amahle emhlabeni angathandekiyo nguQin Yinjian. Kutheni le nto umfazi enabantwana?
UAntangi wayengalindelanga ukuba uLu Xi angavuma ukuba wayehlala elandela uQin Yinjian ukubona iindawo ezinkulu nezincinci. Naye ebedidekile. Uye wema endaweni enye wajonga u Lu Xi. Wayengazi nokuba makame ecaleni kwabantu asole uLu Xi okanye ajongane nabo.
Nangona kunjalo, ugqaliso lukaLucy aluzange lubekho kwaba bantu, kwaye kugxilwe kuye kuhlala kwi-ofisi kamongameli.
Ebeya kwenza ntoni uQin Yin ukuba ebesazi ukuba unabo abantwana?
Ngaba ungamphatha njengaba bantu?
U-Lu Xi wayengazi, kodwa wenza elona cebo libi. Ngapha koko, kufuneka amkhusele uLu Lu kakuhle, nokuba angashiya uShengtian.
Xa uLucy wayelahlekile, indoda awayeyijongile ixesha elide inokuba yeva iindaba ngaphandle kwaye wavula umnyango waphuma. Ukuvela kukaQin Yingu kwindawo yecrying pan bekuthe cwaka imizuzwana, kodwa kwimizuzwana embalwa, wonke umntu uleqe eQin Yingu eyokukhalaza ngolwaphulo-mthetho lukaLu Xi. Ngokucacileyo, yayiyinto eqhelekileyo ukuba azalwe ngaphambi komtshato. Kodwa kwimilomo yabo, uLu Xi waba ngumfazi okhohlakeleyo okhohlisa imali yakhe.
Phakathi kwaba bantu, uZhou Qingqing, umsunguli walo msitho, weqa awona aphezulu.
Ngokukhawuleza xa uZhou Qingqing ecinga ngovuyo lokuvula imfihlo kaLu Xi, walibala ukuba ngubani oza kuphuma ngeli xesha. Ubalekele kuQin Yinjian kwaye wamtyhola ngekratshi: “Mongameli uQin, uqhathwa nguLu Xi. Unonyana ongaphezulu kweminyaka emithathu ubudala. Akakufanelanga. ”
Ngokukhawuleza ukuphuma kwamazwi kaZhou Qingqing, imeko yovuyo yabuya yazola kwakhona. Wonke umntu ubambe umphefumlo wakhe kwaye walinda ekuphela kwendoda enokuthi ilawule isiphelo sikaLu Xi ukuba inike uLu Xi ubunzima, ukuze uLu Xi angaze ajike ebomini bakhe.
U-Lu Xi uyafana. Ulinde isigwebo sikaQin Yinjian.
Nangona kunjalo, wayengazolile njengoko wayebona ebusweni. Wayesele egqibile inqindi lakhe, kunye neminwe yakhe yayifakwe entendeni yesandla sakhe.
Nangona kunjalo, xa wonke umntu ejonge kwiQin Yinjian, kukho kuphela uLu Xi emehlweni eQin Yinjian. Uyambona othukile, ukuba neentloni kunye neemvakalelo ezininzi angazange azifumane ngaphambili.
U-Lu Xi onjalo, ufuna nje ukuba amgone esifubeni ukukhusela kakuhle, makungabikho mntu unokumenzakalisa isiqingatha. Xa wayecinga ngale ndlela, wenza njalo. Phambi koluntu, wathatha uLu Xi wamanga: “Lu Xi, ndiyaxolisa ngokuba ndikonile. Ngendibaxelele unyana wethu iminyaka emininzi. ”
UQin Yin uthethile oku. Kwaphinda kwathi cwaka kwakhona. Kwakuthe cwaka kangangokuba ukuphefumla komntu wonke kunokuba yingxolo.
U-Lu Xi sele enabo abantwana kwaye waxoka ukuba ungumfazi ongatshatanga. Logama eyindoda, kuya kufuneka acetyise ukuba ahlukane neli bhinqa kwaye alikhuphe liphume kwihlabathi lakhe ngokukhawuleza okukhulu, kwaye angaze abonakale phambi kwakhe kwakhona.
Nangona kunjalo, ulwalathiso lwezinto lungaphaya kokulindelwe ngumntu wonke.
Kutheni le nto umntwana waba ngumntwana kaQin Yinjian noLu Xi?
Nangona kunjalo, uLu Xi wayesazi ukuba umntwana akufuneki abe lilungu likaQin Yinjian. Ngaphambi koko uQin Yinjian wambiza wathi useJiangbei.
I-Jiangbei ingaphezulu kweeyure ezilishumi ukusuka eNew York. Ngaphandle kokubhabha kwilitye, u-Qin Yinjian akunakwenzeka ukuba avele eNew York.
Ke, uLu Xi wayesazi ukuba uQin Yinjian uyamkhusela yena noLu Lu.
Okwangoku, usabanjwe nguQin Yin. Ulele ezingalweni zakhe, ubuso bakhe busondele esifubeni sakhe, ukumamela ukubetha kwentliziyo yakhe namandla.
Kuhle ukuba naye!
Ngaye, kubonakala ngathi nokuba izulu liwile, wamnceda ukuba awubambe, kwaye ayizukuthwala umoya kunye nemvula iyodwa.
Xa wonke umntu enalo mbuzo, uZhou Qingqing naye unawo. Wakwazi ukubamba i-pigtail kaLu Xi. Wayenokuzimisela njani ukuvumela uLu Xi abaleke ngokulula: “Mongameli Qin, udidekile? Ingenzeka njani into yokuba abantwana bakaLucy babe ngabakho? Ungamfumana njani umntwana naye? "
UQin Yin ubambele kamnandi kuLu Xi emqolo. Ebona ukuba imo yakhe izinzile, wajonga phezulu kuZhou Qingqing wathi, “Andinakuba namntwana naye. Ingaba kufuneka ndibenomntwana onomfazi okhohlakeleyo onjengawe ongenanto yakwenza nongaboniyo ukulunga kwabanye abantu? ”
Ubuso bukaZhou Qingqing babuphaphathekile luloyiko, kodwa wayengazimiselanga ukuncama ithuba lokutsala uLucy ngokulula kwihashe: “Mongameli Qin, Hayi Hayi, usenokuba wenze impazamo. NguLucy owakuqhatha noLucy owazala amanye amadoda. Ayindim. ”UQin Yinjian akazange amoshe ixesha lakhe kuZhou Qingqing. Wayengadingi kuchaza imicimbi yakhe kwaba bantu bangadibaniyo. Wajikela kwi antinger wathi ngokubandayo, “antinger, ungandenzela lento. Andifuni kubona aba basebenzi eofisini yam.
Abaphathi babo abaziintloko bazivakalisile izimvo zabo, kwaye i-antinger inexhala elikhulu: "ewe."
Phantsi kwamehlo abantu bonke, uQin Yinyi ubambe uLu Xi kwaye aphume aphume eofisini.
Emva kokukhwela ebhasini, uQin Yingu ubuyile kwimeko yakhe yesiqhelo. Wajonga phambili ebanda. Khange ajonge u Lu Xi, ebehleli kwisitulo sabagibeli, khange ayiqale imoto ngexesha.
Banyanisile abo bantu. Logama iyindoda engakhathali nokuba umfazi kanina uzele umntwana womnye umntu okanye hayi, uyakhathala nje, kodwa akaze ayibonise phambi kwabanye kwaye angafuni ukunika abanye ithuba ukukhathaza uLucy.
U-Lu Xi waluma umlomo wakhe waphefumla kancinci. Kanye ngoku uqine isibindi wathi, “Mongameli uQin, enkosi ngokundinceda!”
U-Qin Yin khange aphendule, kodwa uthathe umsi wawulayita, ugqiba amafu uqhuba nenkungu.
Ebona ukuba akamhoyi, uLucy wongeze wathi: “Ndiyazi ukuba oku kuyakuba nefuthe elibi kwinkampani, ngakumbi emva kokuba ubhengeze ukubandakanyeka kum. Ukuba le nto isetyenziswa ngabantu abanomdla kuyo, kwimarike yemasheya kaShengtian ngokuqinisekileyo iya kubethwa. "
U-Lu Xi waluma imilebe wathi, “Ndiyaxolisa kakhulu ngale ngxaki. Ndiza kuyifaka ileta yokuyeka emsebenzini kwisebe lezabasebenzi, kwaye andizukuvela phambi kwakho okanye ndongeze impembelelo embi kuShengtian kwixa elizayo. "
U-Qin Yin uthathe umsi omninzi kwaye wacinezela isiphelo somdiza kwisitya se-ashtray: "Lu Xi, yeyona nto ndiyikhathaleleyo leyo?"
Ayikhathalelanga le, uyakhathala ngaye?
Kunokwenzeka, kodwa uLucy akakholelwa, kwaye akanako ukumnika ithemba, kungoko angacinga eyona ndlela imbi kakhulu: “Andinamali, ufuna ukuba ndikhaphe ukulahleka kwezoqoqosho kukaShengtian, andikwazi yifumane. ”
UQin Yinjian ushukumise inqindi wathi ngamazinyo aqinisiweyo, “ngokabani lomntwana?”
Ukuba bekungekho ngabantwana bakhe, angaphakama ajongane nobumdaka?
Ukubona ukuba uLu Xi akazimiselanga kuphendula, uQin Yin waphinda wabuza, “ngubani utata womntwana?”
Ngubani utata womntwana?
Ngaba kuya kufuneka ukuba athunyelwe kwisikhululo samapolisa namhlanje indoda elusizi?
U-Lu Xi khange afune ukuvuma ukuba umntu osokolayo ngutata ka Lu Lu Lu.
U-Lu Xi uthathe umoya obandayo wathi, "Ndifile."
Lo mfazi uzama ukumtyhola.
Ngeli xesha, xa ndandindedwa kunye noQin Yinjian, uLu Xi waziva edandathekile kangangokuba kwakunzima nokuphefumla: “enkosi ngokuma ecaleni kwam. Ndizohamba kuqala. ”
Xa wayezama ukuqhuba, uQin Yin wakhiya umnyango ngokukhawuleza: "uphi umntwana?"
"Ingaba ufuna ntoni?" Utshilo u Lu Xi
UQin Yinjian: "Ndifuna ukubulala!"
Ndifuna ukubulala umntu wasendle, nomntwana owenze ukuba afe ukuze akhusele.
Ukujonga indlela uQin Yinjian anomsindo ngayo, uLu Xi wayekholelwa ngenene ukuba wayenesibindi sokubulala abantu kwaye engingxamile, "umntwana akekho eJiangbei."
U-Qin Yinjian ufuna ngokwenene ukumbulala lo mfazi!
Ukuthintela ukuba angamniki sandla, u-Qin Yinjian waphinde walayita icuba wakha kwakhona: “Lu Xi, ndiza kukunika imizuzu elishumi ukuba undicacisele izinto, kungenjalo andazi ukuba ndiza kwenza ntoni . ”
U-Lu Xi akafuni kuyikhankanya, ngakumbi ku-Qin Yinjian, owayemadolw 'anzima ukuvula umlomo wakhe.
Ukujonga ukungcungcutheka kwakhe, uQin Yinjian unomsindo. Ucinezela ukuphela kwecuba aze amwonge entloko. Uyamtyhalela kuye aze amange kakhulu. Ufuna ukumanga ngokunzulu ngakumbi. Nangona kunjalo, uLu Xi usaluma imilebe yakhe ngokuqinileyo, emenza angakwazi ukuphumelela. Emva kokubanjwa okuninzi, imilebe kaLu Xi yayidumbile kukulunywa nguQin Yinjian, kodwa akakwazanga ukuqhubeka. Uye wamyeka ngomsindo kwaye wazibamba, ke uFang angathetha naye ngelinye ilizwi: “Undicelile ukuba ndikhe ndikunike elinye ixesha kwiofisi yokubhalisa umtshato ngala mini,
ULucy wanqwala, “ewe.”
UQin Yinjian: "utata womntwana uswelekile?"
Lucy: Ewe unjalo
UQin Yinjian: "Ndiza kuba ngutata womntwana kwixesha elizayo."
U-Lu Xi ujonge uQin Yinjian ngamehlo athe kratya kwaye othukile, "Qin Yinjian, uyazi ukuba uthetha ngantoni?"
UQin Yinjian: "baphi abantwana?"
UQin Yinyu: "usisiyatha?"
Emva kwexesha elide, uLu Xifang ukhupha amagama amabini: "isibhedlele."
Endleleni eya esibhedlele, uQin Yinjian khange aphinde athethe, kodwa waqonda kancinci ukuba isizathu sokuba uLu Xi acinge ukuba imali ibaluleke ngaphezu kobomi kufuneka ibekho ngenxa yenkwenkwana encinci ecaphukisayo esibhedlele. Ngaphambili, wayenentlanganiso nomfana omncinci ocaphukisayo emnxebeni, kodwa wayekholelwa ukuba uLucy wathi umntwana ngumhlobo wakhe olungileyo, kwaye akakhathali kangako. Ngoku kubonakala ngathi ndisisidenge ngokwenene. Kutheni umntu engajonganga lo mfazi.
Akulona uhambo olude ukusuka kwikomkhulu le-Shengtian ukuya kwisibhedlele sase-Shengtian, kodwa u-Lu Xi uziva ngathi kudlule inkulungwane. Emva kokubhencwa kukaLu Lu Lu, uhlala ecaleni kukaQin Yingu, ongakhathaliyo. Kufana nexesha elide.
Ngethamsanqa, kunzima ukuya esibhedlele.
U-X Xi uphume emotweni ngeyonaxesha likhawulezayo kwaye ebenomdla wokubaleka. UQin Yinjian wabona umbono wakhe ngokulula: “Esi sisibhedlele sikaShengtian. Lixesha. Andazi ukuba yintoni injongo yokubaleka kwakho. ”
Ukuva ilizwi elihlabayo likaQin Yin, uLu Xinu wathi, “ngubani othi ndizokubaleka?”
Wayefuna nje ukubaleka, hayi nyani.
U-Qin Yinjian ulungile. Myeke isibhedlele saseShengtian. Nokuba iJiangbei iphela, nokuba lihlabathi liphela, inokufunyanwa ukuba ifuna ukuyifumana. Emva kokuba uQin Yinjian ehle emotweni, khange aphinde athethe noLu Xi. Wayekhokela kwicala lokuhamba nelifti, kwaye u-Lu shidun wamlandela engxamile xa waphendula wathi: “Mongameli u-Qin, u-Lu Lu ngumntwana oqiqayo kodwa onobuthathaka kwangaxeshanye. Xa ndimbona kamva, ndiyanibongoza ukuba nibe nobubele. Musa ukumnika ubuso obubandayo, okanye uya kucinga ukuba awumthandi. "
“Umhlaba nomhlaba? Laa nkwenkwana icaphukisayo ibizwa ngegama elibi likaLu Lu? ”UQin Yin watsho ngekratshi efulathele uLu Xi. Wayecinga ukuba igama lakhe liyoyikeka. Andibathandi abantwana abanamagama amabi kangaka. ” Andikucelanga ukuba umthande, ungamoyikisi. ” UQin Yinjian uthethe ngendlela amcaphukela ngayo uLu Lu Lu. Njengomama kaLu Lu, uLu Xi wakhathazeka xa esiva oko. “Lu Lu Lu ligama lam. Igama losapho lwam nguLu He. Logama unyana wam elithanda igama
kwaye ukhathalele ishishini labanye abantu. ”
Uyintoni unyana wakhe?
Yintoni ukukhathalela abanye abantu?
Kutheni le nto yena kunye nonyana omncinci ocaphukisayo ingabo bodwa ngaphandle kwakhe?
Ubuso bukaQin yinlian butyhafile ngesantya esibonakalayo. U-Lu Xi ebeyazi ukuba unomsindo kwakhona. Wayengonelisekanga noko wathi, “ngubani lowo? Andikuqumbelanga ngokungxolisa unyana wam. Ngobuphi ubuso ondicaphukeleyo?
UQin Yin uthe ngelizwi elibandayo, “awunakucofa ilifti?”
U-Lu Xi ucinezele ngokukhawuleza umgangatho wesibhozo, i-lifti ivaliwe kwaye baya ngqo kumgangatho wesibhozo we-inpatient yesebe lesibhedlele.
Ekugqibeleni, bafika ngaphandle kwegumbi lesibhedlele.
ULu Lu usewadini. U-Lu Xi akalindi ukubona umfana omncinci. Ufike wazama ukutyhala umnyango, kodwa uQin Yinjian, lowo angamhoyiyo, uyambuyisela emva.
U-Lu Xi wayefuna ukubona uLu Lu, kodwa wayengenamonde kwaphela ngesimo sengqondo sikaQin Yinjian: "Wenza ntoni uQin Yinjian?"
Ngaphambili, uQin Yingu wayecinga ngemifanekiso emininzi yokuhlangana noLu Lu. Nangona kunjalo, xa wayekunye kuphela ucango kude ukubona le nkwenkwana imenze buhlungu, wabuya. Yayilixesha lokuqala ebomini bakhe ukuba abuyele kuye ngenxa yento enye.
Phambi kokuba eze, wayecinga ukuba ayinamsebenzi ukuba loluphi olu sana. Ngethuba nje umntwana wayenguLucy, umntwana kaLucy wayengumntwana wakhe.
Uyazenzela ngokwakhe ngale ndlela.
Kodwa xa efuna ukujongana nomntwana ozelwe ngumfazi othandekayo kunye namanye amadoda, umbono wakhe uyashukuma. Akafuni nokumbona umntwana. Akanakwamkela ukuba umfazi othandekayo uzele umntwana ngamanye amadoda.
Unethemba lokuba igama lomntwana ozelwe nguLu Xi ngu Qin, ukuba umntwana ozelwe nguLu Xi ligazi lakhe, kwaye umntu igama lakhe nguyise
Zininzi izimvo engqondweni yakhe, kodwa emva kokucinga amatyeli aliqela, uQin Yinyi wazinyanzela ezo zinto entloko wazogquma iingcinga zakhe zenyani ngenye indlela: “umyeke nje lo mntwana aphile kule wadi? Zingaphi izigulane ezihlala kwisinye? "
U-Lu Xi wayesazi ukuba imali ayikaze ibe yingxaki kwilizwe likaQin Yingu, ngoko ke akazange azikhathaze ngemali. Mhlawumbi wayengazi ukuba kukho abanye abantu emhlabeni abangakwaziyo nokutya.
U-Lu Xi wancuma wathi, “Mongameli uQin, kuhle kakhulu ukuba abantu base-US baye esibhedlele sabucala sika-Shengtian bayokufumana unyango. Usenokungazi ukuba baninzi abantwana emhlabeni abangakwaziyo nokuhlala esibhedlele. ”
U-Lu Xi khange azikhankanye, kodwa xa esiva amazwi akhe, intliziyo kaQin Yinjian ibibuhlungu noko. Ngaba wayenamava okuba umntwana wakhe uyagula kwaye akakwazi nokuhlala esibhedlele, ke uya kuba njengolu hlobo lokuthatha imali njengobomi? Ubengazi ephethe uLu Xi ngesandla: “UShengtian wenza izinto ezininzi zesisa xa utata wayephethe. Unyaka nonyaka, uShengtian wanikela ngethemba kwizikolo zamabanga aphantsi, kwaye wayehlala enikela ngemali kwamanye amaziko ezonyango, ngethemba lokuba abantwana abaninzi abangasiboniyo isifo bangafumana unyango olulungileyo. Emva kokuba ndingene ezihlangwini zam, bendikwanesebe elikhethekileyo elijongene nomsebenzi wesisa, kodwa khange ndibuze lukhulu malunga nam. Kwixesha elizayo, ndizakuhoya lo mba ndizame ukwenza ukuba bonke abantwana abagulayo babe nemali yokuya esibhedlele bayokufumana unyango. "
UQin Yinjian wakwazi ukuyithetha le nto, eyayingaphaya kokulindelwe nguQin Yinjian. Uye wamjonga ngobubhanxa walibala ukuba uzothini okwethutyana. Ukuphuma kukaZhang ewadini, wabona uLu Xi apha. UZhang naye wamangaliswa: "Lu Xi, kusekutsha kangaka ukuphuma emsebenzini?"
U-Lu Xi sele eza kuphendula. Utitshala uZhang ufumana uQin Yinjian ecaleni kukaLu Xi kwakhona: “Hee, Lu Xi, yiyo le?”
U-Lu Xi uhleka kakubi: “ngumphathi wam lo. Ufundile ukuba uLu Lu uyagula namhlanje. Xa edlula, wayedlula ukuze ajonge. ”
UQin Yinjian khange aphikise ngamazwi kaLu Xi ngamagama, kodwa wabamba uLu Xi ezingalweni zakhe ngenkani encinci.
Umphathi wakhe angambamba ezandleni zakhe, ewe, ubudlelwane abukho nje ngokulula njengomphathi wakhe. Umnumzana Zhang ngumntu oqondayo, kwaye ngokukhawuleza wathi: “Lu Lu uvukile nje, uyangena umkhaphe. Ndizakuphuma ndiye kuthengela uLu Lu iziqhamo. ”
U-Lu Xi unika u-Qin Yin ukubukeka kakubi. Uyacaphuka nyani.
U-Qin Yin khange acinge ukuba akukho nto malunga nayo. Ngamanye amaxesha izenzo ziyinyani kunamazwi.
U-Lu Xi uthe, “u Lu Lu uvukile. Ndiza kumkhapha. ”
UQin Yinjian: “hamba. Ndiza kutshaya umdiza. "
Ngapha koko, uQin Yinjian akafane atshaye, ngaphandle kokuba ufuna ukubamba imo yakhe kwimeko okwangoku, emva koko unokuyicinezela ngecuba. Ngoku wenza izizathu zokutshaya, kodwa akakakulungeli ukudibana naloo mntwana unomsindo.
Ukuba kuphela loo nkwenkwana yayingumntwana wakhe uLu Xi ujonga uQin Yinjian kwaye uyazi ukuba akazimiselanga kungena, okanye anyanzelwe. Ngapha koko, unomdla wokuba uQin Yinjian ahambe kwangoko. ULu Lu ngumntwana onomdla kakhulu. Ukuba ubona ubuso obubandayo bukaQin Yinjian, uya koyika. Ukuba uthetha into embi, kuya kuba kubi ngakumbi ukuba uyamcaphukisa uQin Yinjian.
“Emva koko ndiza kuqala,” watsho uLucy Qin Yin ewangawangisa.
Emva kokuba uLu Xi engena ewadini, uQin Yingu wakhupha icuba kwaye sele eza kuyikhanyisa. Ecinga ukuba sisibhedlele, wafumana indawo yokutshaya. Abantu abaninzi babetshaya kwindawo yokutshaya. Wayengasetyenziselwa ivumba lokutshaya, ngoko ke waphinda waya ngaphandle engatshayi.
Isibhedlele yindawo exakeke kakhulu, abantu beza kwaye bahambe, abanakuze bayeke, ezenza uQin Yinjian avakalelwe kukuba nakulomhlaba ophumelelayo, usengaphandle kwehlabathi.
Mhlawumbi kungenxa yokuba wazalelwa kusapho olunjengolukaQin, ohluke kubantu abaninzi. Wonke umntu unogqirha wakhe. Ngokuqinisekileyo uya kuhlala kwigumbi eliphezulu, elinobunewunewu kunehotele eneenkwenkwezi ezintlanu. Zange wakha wakuva ukubandezeleka kwabantu abaqhelekileyo.
Ukucinga ngale nto, uQin Yinjian ujika aye kumongameli wesibhedlele, acele umongameli ukuba abize ugqirha kaLu Lu, noLu abe ngugqirha abize ingxelo kaLu yezonyango ukuze ayazi imeko.
Xa wabona irekhodi likaLu Lu lonyango, yaphinda yabuhlungu intliziyo yakhe engazi.
Ngoku iyeza lisanda kwaye liphuculwe ngakumbi, i-leukemia ayisosifo, -umntwana omncinci.
Kwirekhodi lonyango, umgcini kaLu Lu uhlala enguLu Xi kuphela. Ikholamu katata ihlala ingenanto, nto leyo engangqina ngokungangqalanga ukuba uLu Xi usenokuba akazange axoke, kwaye utata womntwana kungenzeka ukuba asweleke, kungenjalo, ngekhe ambuze umntwana yonke le minyaka.
Oko kukuthi, kule minyaka, uLu Xi akagcini nje ngokuxhasa umntwana omncinci, kodwa ukwanoxanduva kwiindleko ezibizayo zonyango kunyango lomntwana omncinci. Yintoni emenza ukuba athwale umthwalo onzima yedwa, intombazana engekafiki iminyaka engama-23.
UQin Yin wayenomsindo kangangokuba wasonga inqindi waza wabetha idesika kagqirha. Oko indoda egwetyelweyo yathatha uLu Xi yamzalela umntwana noLu Xi, wayengazi ukuba angamkhusela njani umama nonyana wabo. Ke waya ku-Yan Wang Ye kwangoko kwaye wamyeka wasokola nomntwana wakhe yedwa.
Ugqirha ophethe unyango luka-Lu Lu Lu kunye ne-Dean boyikiswa bubundlobongela bukaQin Yinjian ngequbuliso. Bangingxamile, “Mongameli Qin kunye noMongameli uQin…”
UQin Yinjian uthe, "thetha nam ngemeko yabantwana." Ugqirha owayekhona wathi: “UMongameli uQin, uLu Lu wayekhe walaliswa esibhedlele kanye ngaphambili. Waphathwa e-United States kwaye imeko yakhe yayilawulwa. Kunyaka ophelileyo, imeko yakhe ibintle noko. Ngeli xesha, wathunyelwa esibhedlele ngenxa yokonakala ngesiquphe, kodwa ugqirha wethu uye wakulawula ukonakala kwakhe okuqhubekayo. "
UQin Yin uthathe amashiya akhe wathi, "ukulawula nje imeko yakhe?"
UDean kwangoko wathi, “kufuneka silungiselele oogqirha abagqwesileyo ukuba banyange abantwana baseLu Lu ngeyona nyango intle. Kufuneka sibenze ngcono abantwana ngeli xesha lifutshane, ukuze aphile ubomi obusempilweni nobonwabisayo njengabantwana abaninzi. ”
UQin Yinjian uthe: “kwangoko aqale ukutshintsha iwadi yakhe, ugqirha olungileyo makamnyange, athumele olona nyango lukumkhathalela. Kwixesha elizayo, asinakubiza enye imali kunina nonyana wabo. Ndiza kuba noxanduva lwazo zonke iindleko zonyango zomntwana. ”
UMlawuli wanqwala: "ewe."
Esi sibhedlele yipropathi yosapho luka Qin, kunjalo, into eyathethwa lusapho lakwa Qin.
Ukushiya iofisi yomphathi, uQin Yinjian waya kwiwadi kaLu Lu kwakhona. Wayesoyika ukubona umntwana.
Kunyaka odlulileyo, wathatha umthwalo kaShengtian yedwa. Ngelo xesha, utata wakhe wayengekho. Wayengenalo loyiko xa ejongene nemithombo yeendaba kunye nabanini zabelo kwiqela. Namhlanje, ngenxa yomntwana omncinci kangaka, ude wazala umbono wokuba akazi ukuba makathini.
Emva kwexesha elide lokuthandabuza, uQin Yinjian wafumanisa ukuba ukuba ufuna ukuhlala noLu Xi, nokuba angathandabuzi kangakanani ukwamkela umntwana, kodwa inyani kufuneka yamkelwe, kuba wayesazi ukuba phakathi kwakhe Umntwana, uLu Xi wayefuna umntwana. Emva kokuyicinga kakuhle, uQin Yingu weza ewadini kaLu Lu kwakhona. Ngeli xesha, akazange athandabuze kwakhona. Utyhale ucango wavula ngqo, wavula umnyango wajonga. Okwangoku, uLu Xi ebehleli ecaleni kwebhedi yokugula ekufuphi nefestile, ephethe iapile ngesandla. Wondla umntwana omncinci olele ebhedini yokugula ngecephe.
Inkwenkwana yavula umlomo wayo banzi kwaye yayincuma kuLucy ngalo lonke ixesha xa iluma.
Nangona ubuso bomfana omncinci bungemhle kakhulu, uncumo ebusweni bakhe lumnandi kakhulu Lo mfanekiso uhambelanayo wawuthandwa nguQin Yinjian. Emva komona, wayegcwele kukungoneliseki. Inkwenkwana yayimbi kwaye inoncumo olubi. Angathini ukuba uzonyanya.
Ingqondo kaQin Yinjian yeza nomfanekiso. Ukuba yena noLu Xi babenomntwana, ngokuqinisekileyo umntwana uya kuba ngoyena mntwana ubalaseleyo emhlabeni. Ibingazukuba mbi njengale nkwenkwana, ngakumbi xa ihleka. Kuya kuba kubi kakhulu.
Nangona kunjalo, u-Lu Xi ewadini wayengazi ukuba u-Qin Yinjian wayemi emnyango, waqhubeka nokugxoba ii-apile wazityisa ku-Lu Lu Lu ngecephe: “nyana, kufuneka sitye iziqhamo nemifuno kwixa elizayo. , ukuze sibe nokutya okusempilweni? ”
U-Lu Lu wanqwala ngothando: "Lu Lu mamela uMama."
Mamela ilizwi lomntwana, uLucy uhlala engakwazi ukulawula impembelelo yokumanga. Xa ecinga ngayo, wenza okufanayo. Ujonge phantsi kwaye wancamisa ubuso bosana: “unyana wam uyathandwa. Umhle kakhulu ukuba umama ufuna ukukutya. "
U-Lu Lu sisithandwa sikaMama
U-Lu Xi watsho ngoncumo, “kulungile, sithandwa sam esincinci, uMama uzakutya.”
U Lu Lu wakhathazwa ngu Lu Xi wagigitheka. Usebenzise amandla akhe ukwenza ubuso bakhe obumdaka bubukeke ngcono: “Mama, Mama…”
U-Lu Xi uvula umlomo wakhe kwaye uzama ukumluma: “Umama uzotya u-Lu Lu. U Lu Lu woyika? ”
U-Lu Lu unikina intloko: "Lu Lu Lu uyazi ukuba umama uyamthanda uLu Lu Lu, kwaye uMama akazomtya uLu Lu."
“Ukrelekrele nyana wam!” Utshilo uLucy
Lu Lu: "ngoba uMama ukrelekrele."
Umama nonyana abaprintwe emehlweni bayathandeka kwaye bamnandi. Xa bekunye, kubonakala ngathi akukho mntu unokungena kwihlabathi labo ebajonga, uQin Yinjian akazange athabathe inyathelo lokungena egumbini.
Okwangoku, khange amamkele umntwana.
UQin Yin uthule wavala umnyango waphuma.
Usafuna ixesha lokumba ezi zinto namhlanje.
Xa uQin Yin ethe cwaka evala ucango, uLu Xi wayejonge phezulu wabona umfanekiso wakhe onesithukuthezi.
Wayesazi ukuba akawamkeli umhlaba nomhlaba, kwaye ngekhe amsole. Namhlanje, phantsi kweemeko ezinjalo, uthathe isigqibo sokuma ecaleni kwakhe ukuze amkhusele kwaye amvumele ukuba aqonde ukuba eneneni, iimvakalelo zendoda ngaye zihlala zingatshintshi, ngaphandle kokuba ezinye izinto ziyenzeka kwaye azisayi kubuya ngaphambili.
Ubomi, enyanisweni, yinkqubo yokukhula okuqhubekayo.
Yinto elungileyo ukuba sizamile zonke iintlobo zezinto. Ubuncinci sinokuhleka kuyo yonke into kwixa elizayo.
“Mama, kutheni ungonwabanga? Lu Lu uyakwenza ungonwabi? ”U-Lu Lu ubuthathaka nyani. U-Lu Xi ufinge iintshiya kancinci, nto leyo emenza azive ukuba imeko kamama ayilunganga. Ujonge ku Lu Xi.
“Nyana wam osileyo, nawe ecaleni kukamama, uMama uya konwaba kuphela. Angonwaba njani? ” U Lu Xi uhlikihle intloko ka Lu Lu Lu. “Mfana omncinci, sukucinga kakhulu kamva, khumbula nje ukuba umama ukuthanda ngonaphakade.”
U-Lu Lu wanyanzelisa: "kodwa umama awonwabanga."
U-Lu Xi watsho ngoncumo, "Nokuba uMama akonwabanga ngenene, ayizukuba ngenxa ka Lu Lu."
Umlomo omncinci kaLu Dudu: “ngaba kungenxa yomntu ombi?”
Ngokukhawuleza uLu Xi uvale umlomo kaLu Lu Lu: “nyana, uMama ukuxelela ukuba akukho mntu umbi kwaphela. Awuvumelekanga ukuba ukhankanye abantu ababi kwixesha elizayo. ”
Umlomo kaLu Dudu: “ngoyena mntu ukhohlakeleyo owenza umama abe nomsindo.”
U-Lu Xi uthe, 'Lu Lu, mamela uMama. Awuvumelekanga ukuba uthethe ngabantu ababi okanye abantu ababi kakhulu. ”
U Lu Lu akafuni mama bakhathazeke ngayo. Uye wanqwala: "Lu Lu akayithethi lonto."
Ngoku mncinci kakhulu ukuba angakhusela uMama. Xa sele ekhulile kwaye enamandla ngokwaneleyo okukhusela uMama, kufuneka abulale isilwanyana esikhulu sasekhaya esenza ukuba umama angonwabi kwaye avumele i-villain enkulu ukuba yazi amandla akhe.
Ukuphuma nje kwesibhedlele, uQin Yinji ufowunelwe ngu-An Tingjie, owayengxamile wathi, “Qin Zong, kukho into engahambi kakuhle! Yinto enkulu! ”Abantu abanokusebenza noMongameli Shengtian ngabantu abakhethwe ngamawaka abantu nabaqeqeshwa iminyaka emininzi. Nokuba ujongene nayiphi na ingxaki, bayakwazi ukusingatha ezinye izinto endaweni yomongameli wabo. Ngokukhawuleza, i-antinger idlakadlaka kangangokuba uQin Yinjian akanelisekanga: "Yintoni eyona nto inkulu?" “Umntu othile waliveza ibali likaLu Xi kwaye waqondisa ukuba umlingane kamongameli wangoku kaSheng Tian wayenomntwana omncinci, kwaye wayengazi nokuba ngubani utata womntwana. Nje ukuba iindaba ziphume, phantse kwangoko zangena kwimixholo ephambili yazo zonke iiwebhusayithi. Okwangoku, iindaba bezisasaza kwihlabathi liphela, kwaye siza kulususa ngenkani uphando olushushu. Akunakuphela nje ukuba singavali abadli be-melon, kodwa sinokukhokelela kuzo zonke iintlobo zeengcamango ezimbi. "
“Ngubani ovakalise ezi ndaba?” Njengomphathi oyintloko weqela lika-Shengtian, iqela lezemali lehlabathi, nangona u-Qin Yinjian engakhange enze nto, yonke into ayenzayo yatsala umdla wehlabathi, kwaye baninzi kakhulu abantu abanomdla kuye kunezo nkwenkwezi zidumileyo.
Iqela le-Shengtian liphezulu kuluhlu lwamashishini anenzuzo enkulu kwihlabathi iminyaka emininzi, kuba isiphithiphithi esincinci sinokubangela isiphithiphithi kwezoqoqosho kwihlabathi liphela.
“Ndilungiselele umntu oza kuyifumana,” watsho u-antinger. Akukabikho nkcazelo ke ngoku. ”
“Qhubeka ujonge.” Kule minyaka, luhlobo luni lwesaqhwithi esingakhange silubone, uQin Yinjian wabuyela esibhedlele wathi, “okoko ibali likaLu Xi livelile, malivezwe ngokupheleleyo. Thatha ithuba lwanamhlanje lokwazisa wonke umntu ukuba uLucy ngumfazi wam. "
"Ewe." U-Antinger wanqwala wathi, “isebe le-PR lize nezicwangciso ezininzi. Ndiza kukuxelela. ”
Olu hlobo lwento lunempembelelo kwinkampani. Okwangoku, kubonakala ngathi iimpembelelo ezimbi zinkulu kuneempembelelo ezilungileyo.
Ngeli xesha, iqela lobudlelwane boluntu lika-Shengtian lize nezisombululo ezahlukeneyo kunye nezicwangciso zokukhetha abantu abadala kumongameli.
Enye yezona zinto zingcolileyo kukutyhala uLu Xi. UQin Yinjian ubonakala njengexhoba. Le yeyona nyaniso ikufutshane nenyaniso, kodwa uQin Yinjian uyeva ukuba ipasile ilahlekile, kwaye uthi ngokungathandabuzekiyo: “Ukuba uQin Yinjian akakwazi ukukhusela abafazi bakhe kakuhle, yintoni enye endinokuyenza? Ubaxelela nam ukuba uLucy ngumntu akukho mntu unokumchukumisa. Ukuba nabani na ufuna ukwenza uluvo ngaye,
Andikwazi kumnceda. "
“Mongameli Qin, ungakhathazeki, ndizakubaxelela ngoku,” watsho u-antinger
Kwiwadi, u-Lu Xi uthathe incwadi yamabali yabantwana kwaye wayixelela u-Lu Lu ngokucacileyo: "bekukho ingcuka kamama kunye nengcuka encinci ehlala ehlathini." ukuze ikhathalele ingcuka encinci, umama wengcuka wazama ukufumana ukutya yonke imihla…
U-Lu Xi ebesitsho ukuba ucango lwewadi luvele kwangoko luvuliwe, kwathi gqi uQin Yinjian, owayesele ephumile, ewadini.
Ukumbona efika, uLucy wonwabile: “awuhambanga? Ubuya njani? "
UQin Yinjian weza, akukhathaleki ukuba bekukho abanye abaguli ewadini, wathabatha uLu Xi wamgona: “Lu Xi, kukho into ekufuneka usebenzisane nayo.”
U-Lu Xi uye washukuma, akazange asokole ezandleni zakhe, ungxamile wabuza, "yintoni ingxaki?"
UQin Yin uthe, "masibhalisele umtshato kwangoko."
Ngaba lo mntu uyahlanya?
Akuphambuki ukwazi ukuba unomntwana kwaye kufuneka abhalise umtshato naye.
Kuya kufuneka aphangele.
Umothuko, unxunguphalo, uloyiko Zonke iintlobo zeemvakalelo zakhawuleza zangena entliziyweni kaLucy, ezamenza waphulukana.
“Sikhohlakali! Ingcuka enkulu embi! Ungumntu ombi! ”U-Lu Lu ngequbuliso waphulukana nolawulo kwaye wagquma. Umzimba wakhe omncinci wasokola ukuvuka. Wazama ukutyhala uQin Yinjian ngamazinyo neenzipho zakhe. Wakhwaza ngelona lizwi likhulu anokulisebenzisa. “Mfondini, andikuvumeli ukuba ungcungcuthekise umama! Sukungcungcuthekisa umama wam! "
U-Lu Xi utyhale uQin Yingu ecaleni wamanga uLu Lu, ongalawulekiyo. “Nyana, akukho magorha makhulu kwaye akukho mntu uxhatshaza uMama. Sukoyika, Kulungile? ”
Kodwa u Lu Lu ebengamva tu lamazwi ka Lu Xi. Wakhala walila, “mfondini umbi! Ungumntu ombi! Mka, villain enkulu. Sukungcungcuthekisa umama wam! "
Amashiya kaQin Yinjian afinge iintshiya. Le nto incinci, khange ayidelele nangoku. Kutheni angamthandi? Uyakholelwa okanye akunjalo, wamphosa ngefestile?
U-Lu Xi wacebisa ephinda-phinda: “Lu Lu Umhlaba nomhlaba… Akangomntu mbi kwaphela. Uyakholelwa kuMama? "
ULu Lu ujonge phezulu ezingalweni zikaLu Xi wajonga eQin Yinjian wathi kuLu Xi, “Mama, ubukeka embi kwaye eyoyikeka. ULu Lu Lu akamthandi… ”
Lo mfondini unokuthetha njani ukuba ukhohlakele?
Ngokucacileyo, ayinakwenzeka. Kukho into engalunganga ngala nto incinci yamehlo.
“Ewe, uLu Lu uthe umbi. Wayembi. ” U-Lu Xi uyamthuthuzela u-Lu Lu Lu kwaye ujonge cwaka eQin Yingu. Ukunyaniseka, ukuba uQin Yingu mubi, akufuneki kubekho ndoda intle emhlabeni.
Andazi ukuba unyana wakhe ngowuphi umbono, ucinga ukuba uQin Yin umbi kangakanani? Kubonakala ngathi amadoda abona amadoda ngokwahlukileyo kunabafazi, njengokuba uninzi lwabasetyhini lungabafazi abahle emehlweni amadoda, kunjalo nangamehlo abafazi.
“Mama…” uLu Lu ugalela ezingalweni zikaLu Xi ngomlomo wakhe, kwaye ubeka inkangeleko elusizi enokukhala nanini na. “U-Lu Lu akafuni kubona isikhohlakali. Uthini ngomama ukunceda uLu Lu amgxothe? ”
U-Lu Xi, enobuso obubuhlungu, wakhala kabuhlungu entliziyweni yakhe: “nyana, ndicela ungaphinde uthethe, Kulungile? Ukuba siqhubeka, uMongameli uQin uya kuba nomsindo. Kodwa unomsindo. Ngunyoko osokolayo. Ukuba usamthanda umama wakho, ungathethi ngayo. “Ntwana, uyayazi le nto uyithethayo?” UQin Yinjian wayenomsindo wokwenyani, kodwa ngeli xesha, ixhoba yayingenguye uLu Xi, kodwa ngulo ubangele le ntlekele. Ufike wamphakamisa u Lu Lu Lu, eshukuma kabini ingathi uphethe inkukhu. “Andiqondi ukuba amehlo omntwana wakho akhangeleka ngathi kukho ingxaki
, uthetha njani ngobubhanxa. ”
UQin Yinjian ufuna ukuphakamisa into encinci ayiphose ngefestile. Ngumfo omncinci omubi. Kuphi ukuzithemba komfana omncinci ukuba umbi?
Nokuba le nto incinci kunye nefuthe likanina azonelanga, kunzima ukwahlula phakathi kwento entle kwaye ayintle,.
U-Lu Lu uphethe u-Qin Yinjian entloko kwaye uyakhaba kwaye wenza ingxolo: “mfondini omubi! Ndiyeke! Okanye ndiza kukuluma! "
"Ukuluma?" UQin Yin wafutha, “uyinjana? Ukuluma kuphela? "
Ubuso bukaLu Lu babubomvu: “mfondini! Ungandichukumisi. Andikuthandi! Ndiyakucaphekela! "
“Lu Lu, ungakhathazeki. Umama angakunceda. ” U-Lu Xi uzama ukubuyisa uLu Lu Lu, kodwa uQin Yinjian uyamnqanda kwelinye icala, kwaye unomsindo kangangokuba uLu Xi uyaxhuma. “Qin Yinjian, ndicela umbeke phantsi msinya ungamoyikisi.”
UQin Yinjian: "le nto incinci ayicocekanga."
“Ngunyana wam,” watsho ngomsindo uLu Xi. “Nokuba akenzi njalo, ndim kuphela onokumcoca. Ingaba yintoni ingxaki nawe?"
Ewe, kungenxa yokuba unyana wakhe akananto yakwenza naye.
Hayi, ayinanto yakwenza naye ngaphambili. Ukusukela namhlanje, unyana wakhe ngunyana wakhe. Uthandabuza uqeqesho. Uya kumohlwaya. Makangavumeli lo mntwana ushiyekisayo ukuba abe semthethweni.
Ngelixa uQin Yinjian ephazanyisiwe, uLu Xi wahlutha uLu Lu ezandleni zakhe wathi, "nyana, uyaphila?"
U-Lu Lu wathetha kabuhlungu, "Mama, masibize amapolisa avumele amapolisa athathe le ndoda ingendawo."
Emehlweni kaLu Lu, uQin Yinjian ubonakala ngathi ngumntu okhohlakeleyo kubo bonke ububi. Ukuba awukwazi ukumsusa, vumela amapolisa amthabathe amvalele. Ngamafutshane, awunakuvumela lo mmi mbi avele phambi kukaMama.
“Lu Lu, umalume wam akangomntu ombi. Amapolisa awayi kumbamba. Umama uzakumcebisa. ” U-Lu Xi u madolw 'anzima ukuvumela uLu Lu ukuba afumane isikhalazo esincinci, ke kufuneka enze isikhalazo uQin Yinjian, "Mongameli uQin, uLu Lu woyika ubomi, ndicela uphume kuqala?"
Wayefuna ukungahoyi umama nonyana kwaye bahlale apha, kodwa abanye abaguli bebhedi babemjonga njengezilo, nto leyo eyayimenza angakhululeki. Ke kuye kwafuneka ahambe kuqala, kwaye ngoko nangoko alungiselele ukutshintsha umhlaba nomhlaba awuse kwiwadi ephezulu.
U-Lu Xi wanelisekile sisibhedlele uLu Lu angayibeka phantsi e-Shengtian. Ngoku akazimisele ngokutshintshela u-Lu u-Lu kwiwadi ephezulu, kodwa ufuna ukunika uLu uLimo olungileyo lokuphatha imeko, ke uyavuma.
Ngoku bathathu kuphela ewadini. UQin Yin ujonge uLu Lu. Ngokwenyani, okukhona emjonga lo mfo mncinci, kokukhona ecaphukisa. Ngokukodwa xa ebona ukuba lo mfo mncinci angadlala ngokucocekileyo ezingalweni zikaLu Xi, amehlo kaQin Yin abomvu ngumona.
Into encinci ecaphukisayo!
U-Lu Lu umthiyile uQin Yinjian. Unobuzaza. Ewe uyabona ukuba uQin Yinjian umthiyile. Utshica ulwimi emqolo kuLu Xi kwaye ufuna ukwenza ubuso ukoyikisa uQin Yinjian. Kodwa akazi ukuba akaboyikisi abantu, kodwa mhle.
Ukubona imbonakalo yakhe entle, intliziyo kaQin Yingu yathamba kancinci. Ewe, yayincinci nje. U-Qin Yingu akangekhe avume ukuba angacinga ukuba le nkwenkwana incinci icaphukisayo ibintle kwaye intle. “Mama, eli gumbi lingcono. Ebusuku, uMama akadingi kulala kumqolo kagqirha. Angalala noLu Lu. ” U-Lu Xi ebengafuni ukuhoya uQin Yingu. Wayexhalabele kakhulu umama wakhe kunye newadi entsha awayesandula ukuyitshintsha. Wayonelisekile kakhulu yiyo yonke into ngaphandle komguvela owayengafuni ukushiya apho.
UQin Yinjian: “Lu Xi, ndiza kukulinda ngaphandle. Uya kuphuma kamva. Ndinento endifuna ukukuxelela yona. ”
Lu Lu: "umama akhonto azakuyithetha nawe."
U-Lu Xi uphinde wamvala umlomo u-Lu Lu Lu wathi ngokungathandabuzekiyo, "Lu Lu, kutheni abantwana bengenasimilo?"
Uthe nje ukuba uLu Xi abe serious, uLu Lu wamcebisa. Waxhoma intloko yakhe encinci wathi, "Mama, uLu Lu ebeyazi ukuba ayilunganga."
U-Lu Xi wahlikihla intloko yakhe encinci: “ukuba uyazi into engalunganga, kufuneka uyitshintshe. Ingaba uyazi?"
U Lu Lu wanqwala, "kulungile."
Kodwa loo ndoda ingumntu ombi. Akayithandi ngokwenene. Angayitshintsha njani?
“Kulungile, Lu Lu, lala uphumle. Umama uza kubuya umzuzwana. ” U-Lu Xi ucinezela u-Lu Lu Lu ebhedini yakhe. Kuya kufuneka adinwe emva kokwenza ingxokolo ixesha elide. Uyagula. Unokuzilolonga kuphela, kodwa hayi ngaphezulu. Ngaphandle koko, kuya kuba kubi empilweni yakhe.
“Mama, ingaba loo mntu mhle okanye uLu Lu mhle?” U Lu Lu ukhuphe intloko yakhe emgqomeni ngokukhawuleza waphuma nesi sigwebo.
Lu Xi: ngubani lowo
U-Lu uye wakhomba kwilali esandula ukuphuma.
U-Lu Xi wancuma: “ewe, umhlaba wam ngowona uthandekayo, uthandeka kakhulu emhlabeni, akukho mntu unokulingana nawo.”
Ukuva impendulo kaLu Xi, uLu Lu waneliseka kukulala phantsi kumngxunya wakhe: "Mama, ndiyakuthanda."
“Sthandwa sam, ndiyakuthanda nam.” Ukubhengeza uLu Lu. U-Lu Xi uzokufumana iQin Yinjian. Ngaphambi kokuba aphume, wafumana umnxeba ovela kwigqwetha uYang. Ukubona inombolo yefowuni yegqwetha uYang, uLu Xi waba novalo. “Igqwetha uYang, ingaba iziphumo zovavanyo lweDNA ziyaphuma?”
“Ewe,” watsho uYang
U-Lu Xi ngokungazi wavuthulula inqindi, waginya amathe wathi, “Igqwetha uYang, ndixelele iziphumo.”
U-Yang uthe: "I-DNA yale ndoda kunye ne-DNA ka-Lu Lu Lu ayihambelani ngempumelelo, into ebonisa ukuba ayingotata ka-Lu Lu Lu, ke le ndoda ikwenzakalisileyo ngaloo nyaka ayinguye."
Lucy: nyani ayinguye
Igqwetha uYang wongeze wathi: “Lu Xi, sisebenze nzima kakhulu ixesha elide ukuze singafumani mntu. Akangomntu mbi simfunayo. Umele ukuba udanile. ”. Kodwa ayinamsebenzi. Ngalo lonke ixesha siqhubeka nokujonga, siya kuyifumana le ndoda ikwenzakalisileyo. "
Lu Xi: “hayi, igqwetha uYang, ndiyaphila.” U-Lu Xi wayengazi ukuba kutheni. Xa esiva ukuba indoda elusizi ayingotata kaLu Lu Lu, akazange aphelelwe yintliziyo. Endaweni yoko, waphefumla ixesha elide. Wayevuya kakhulu ukuba lendoda ayingo tata ka Lu Lu Lu.
Kule minyaka, igqwetha likaYang belipheleka noLu Xi beyokukhangela le ndoda. Unomdla ongakanani uLu Xi ukufumana le ndoda aze ayithumele ejele, igqwetha likaYang licinga ukuba lifanele lazi kakhulu.
Ngoku le ndoda ize ngalamnyango ayinguye omenzakalisileyo. Isalathiso esilandelayo asazi ukuba ungayifumana phi. Ngokoluvo lwegqwetha, kungenzeka njani ukuba uLu Xi angaphoxeki: “Lu Xi, ndicela undixelele ukuba ukhathazekile, sukuzigcina entliziyweni yakho.”
U-Lu Xi uthe, “igqwetha uYang, ungazikhathazi ngam. Andinanto yakwenza nayo. Le ndoda ayisiyondoda ngaloo mihla. Ndisamfumana. Ngenye imini, ndiyakufumanisa le ndoda yandivisa ubuhlungu ngaloo minyaka kwaye mayingohlwaywe ngumthetho. "
Ukuva amazwi kaLu Xi, uYang wayevuya kakhulu: “Lu Xi, unyanisile ukucinga njalo. Kufuneka ukholelwe ukuba i-tianwanghui ayinankathalo. Kuya kufuneka ukhumbule nokunditsalela umnxeba nangaliphi na ixesha elizayo nokuba kwenzeka ntoni. "
U-Lu Xi wanqwala: “Kulungile. Enkosi, igqwetha uYang! "
Ngeli xesha, uLu Xi wabalwa nguninakhulu ukuba amvumele azale uLu Lu. Emva kwexesha, umama wakhe wesibini wazama ukumnyanzela ukuba abulale uLu Lu. U-Lu Xi wemka ekhaya enomsindo, wanqamla unxibelelwano nosapho, kwaye wafumana indawo yokuthula ngokuzala uLu Lu Lu.
U Lu Lu ebengekho sempilweni emva kokuba ezelwe, kodwa khange ayihoye kwasekuqaleni. Kude kube lusuku olunye xa uLu Lu Lu ngequbuliso wayenomkhuhlane omkhulu ngaphandle kweempawu, u-Lu Xi wamsa u-Lu Lu Lu kwisibhedlele salapho ukuze ahlolwe. Nje ukuba ahlole, uLu Lu Lu Lu wafunyanwa enetyala le-leukemia.
Ukusukela ngoko, ubomi bukaLu Xi buchithwe ngokungxama esenza imali yonyango lukaLu Lu. Ukuze anike uLu Lu Lu ubomi obulungileyo kwaye anyange isifo sikaLu Lu, uLu Xi wayenemisebenzi yesingxungxo ngemini enye xa wayexakeke kakhulu. Wayelala ngaphantsi kweeyure ezintathu ngosuku. Ngethamsanqa, wayehlala edibana nabantu abalungileyo, njengegqwetha uYang kunye notitshala uZhang. Bobabini bamnceda kwelona xesha linzima ebomini bakhe
ngoku uncedwe ecaleni kwakhe, emenza ukuba abambelele kuye ngoku.
Ukuzalwa kuka Lu Lu bekungekho ntle, kwaye impilo ka Lu Lu Lu ibingentle. Esemncinci, uLu Lu Lu wehlelwa zizinto ezininzi abantu abaninzi abaqhelekileyo abangazithwaliyo. Kodwa u-Lu Xi uhlala ejonge imeko ka-Lu Lu Lu ngethemba. Wabandezeleka kakhulu xa wayesemncinci, kwaye ngokuqinisekileyo izulu liya kumbuyekeza.
Ayikuko ukuba kukho intetho ethi izulu liyakuba noxanduva kwimpilo yabantu
Thatha imood, uLu Xi uphume ewadini ayokufuna iQin Yinjian. Xa ephuma, ubona uQin Yinjian ehleli kwigumbi labongikazi ewadini. Uhleli esofeni egumbini, uphakamisa imilenze yakhe kakuhle, ujonga indawo ethile, kwaye akazi ukuba ucinga ntoni.
U-Lu Xi wamjonga weza kuye emva kwethutyana: “Mongameli u-Qin, enkosi ngokulungiselela igumbi elihle u-Lu Lu.”
Ngaphambili, uLu Lu noLu babehlala kweyona wadi ixhaphakileyo yesibhedlele iShengtian. Iwadi enye ibineebhedi ezintathu kunye nezigulana ezintathu. Ukongeza, esinye isigulana sasinosapho olunye oluhamba noko. Kwenye iwadi, phantse abantu abathandathu babexinene kuyo yonke imihla. Xa kuthelekiswa nesuti yanamhlanje enamagumbi kunye neeholo, bakude omnye komnye.
UQin Yin uphakamise imilenze wajonga uLu Xi: “enkosi nje kwanele? "Lucy:" so ufuna ntoni? "
UQin Yin uthe, "ungenza ntoni xa ndifuna?"
Lu Xi: "Ndizakuzama ukwenza imali ukukuhlawula."
UQin Yin wathi, “Owe Unamatyala kum, awusoze uyenze ebomini bakho. "
Ngoku useyinkosi. Uthethile yile ebeyithetha. Ngapha koko, akasayi kwenza nto kuye. Kuba unikele ngemali, makasisebenzise ithuba lomlomo.
UQin Yinjian wongeze, “kuyakubakho izimvo ezimbi kwiSkynet. Ungazihoya ezo zimvo kwaye ndiza kuba nomntu wokujongana nazo. ”
U-Lu Xi wahlala ecaleni kweQin Yinjian wasineka, “ngoku ndizibonile iindaba. Aba bantu bagcwele ngokwenene kwaye abananto yakwenza. ”
U-Qin Yinjian wothuka kancinci: "awunomsindo?"
U-Lu Xi watsho ngoncumo, “bathi anditshatanga kwaye ndinonyana. Yinyani. Andicaphuki. Kwaye bathi ubomi bam abonelanga, kwaye bazama ngako konke ukulukuhla umongameli uQin da. Zonke ezi zinto ziyinyani, kungasathethwa ke ngokuba nomsindo. "
UQin Yinjian: “Hayi, bayaphazama. Ayikuko ukuba urhwebeshe umongameli uQin, kodwa uMongameli uQin ebehlala efuna ukukuhenda. ”
U-Lu Xi unyuse amagxa kwaye ujongeka engenamdla: “ngaba ukhona umahluko phakathi kwezi zinto zimbini?”
UQin Yinjian: "Umahluko mkhulu kakhulu."
U-Lu Xi wajonga uQin Yinjian ngequbuliso wajonga kuye: “Mongameli uQin, ayinamsebenzi into ethethwa ngabantu ngam. Nangona kunjalo, isizathu sokuba baqhubeke nembali yam emnyama ayibangelwa nguwe, umongameli omkhulu weShengtian. "
U-Lu Xi angabona ubudlelwane kwesi sigameko, esingalindelanga kuQin Yin. ULu Xi wayene-IQ ephezulu xa wayesesikolweni. Wabona umhlaba ngcono kunabanye.
UQin Yin uthe, "masimamele." "Ukuba asinanto yakwenza omnye nomnye, baninzi abantu abangatshatanga abasetyhini abanabantwana ngaphambi komtshato emhlabeni, kwaye ndingomnye wabo, andizukuvumela nabani na ayiqwalasele," utshilo uLu. Ngoku baveza imicimbi yam. Ngokoluvo lwam, ayisiyiyo into abafuna ukuyenza nam, kodwa bafuna ukwenza ntoni nawe, Mongameli uQin, ngale nto
U-Qin Yin watsho ngoncumo, "ucinga ukuba bangandenza ntoni?" “Qin Yinjian, sukuwuthatha lula lo mbandela.” U Lu Xi wamkrwaqula wathi ngokungathandabuzekiyo, “Sonke siyazi ukuba aba bantu abanakwenza nto kuwe, kodwa ungathini ukuba baninzi abantu? Aba basasazi bazama ukusasaza iindaba ezingakulungelanga wena. Baninzi abantu ababandakanyekayo kulo msitho, kwaye ngakumbi nangakumbi abantu abatya imelon ukuba abayazi inyani bayabandakanyeka kuhlaselo loluntu malunga nawe. "
UQin Yin wanqwala ngentloko, "kulungile, luhlalutyo olulungileyo. Qhubeleka." “Luluphi uhlalutyo oluhle? Ndikuxelele ukuba unikele ingqalelo kulo mbandela. ”U-Lu Xi wayenexhala lokuba u-Qin Yinjian wenzakele ngenxa yesi sehlo, kwaye inkxalabo yakhe ibonakalisiwe ngamazwi akhe. “Mongameli uQin, kufuneka uyazi ngcono kunam. Eli lixesha lolwazi, kwaye umbono woluntu woyikeka. Ngamanye amaxesha akunakwenzeka ukuba uqikelele imiphumo emibi yokusetyenziswa kwabantu abangayaziyo inyaniso. ”
U-Qin Yin ubambelele kwimilebe yakhe encumile: "ukhathazekile ngam?"
Ukungakhathali kukaQin Yin kwamenza wagquma ngomsindo uLu Xi, “ukuba andizikhathazi ngawe, bendizakuyenza njani yonke lembudane?”
UQin Yin wolule ingalo yakhe ende kwaye warhuqa uLu Xi waya ezingalweni zakhe. Ukuba ukhathazekile ngam, akukho mntu unokundenzakalisa. ”
Kuba akazukuvumela nabani na amenzakalise. Uya kuhlala ubomi obude kwaye akhusele abantu afuna ukubakhusela.
U-Lu Xi akathethi: “UQin Yinjian, ndikuxelela ishishini. Unganceda uzimisele ngakumbi? ”
UQin Yinjian: "Ndizimisele, nam." Lu Xi: “…”
UQin Yinjian uhlala ekude. Uyagodola kangangokuba akafuni kuthetha nabanye. Akazi ukuba kwenzeke ntoni namhlanje. Xa yamxelela inyani, le ndoda yazenza ngathi ijinga.
Ndibona abantu bafuna ukumnika ukubetha kakuhle.
Kubonakala ngathi uLu Xi ungxamile ngokwenene. UQin Yingu uyayazi inyani ukuba ayinakuphela. Uthe: “Kulungile ndizimisele. Ungandixelela ukuba ndenzeni? "
U-Lu Xi waphinde wajonga uQin Yinjian, emva koko wathetha ezakhe iingcinga: "ngoku khangela abantu abasasaza iindaba ubayekise ukusasaza iindaba kwakhona."
UQin Yin uthathe amashiya akhe wathi, “zibangele iziphumo ezibi kangaka kuthi ngokupapasha ulwazi kwisidubedube. Ngaba ucinga ukuba singabathintela ekusasazeni ulwazi? ”
"Inyathelo lokuqala kukuyekisa ukusasaza ulwazi, kwaye inyathelo lesibini kukuzilwela," utshilo uLu. Umama wakhe wakhe wathi kum, ukuba abantu abakhubekisi mna, andenzi njalo. Ukuba abantu bayandikhubekisa, ndiza kubenza bazisole ngokuza kweli hlabathi. "
UQin Yinyi ubuthandile ubundlongondlongo obufihlwe nguLu Xi emathanjeni akhe. Uhlise intloko wathatha uLu Xi wamluma, emva koko wathi, "ucinga ntoni ukulwa?"
U-Lu Xi waluma amazinyo wathi ngokuqatha, "phatha abanye ngendlela yabo."
UQin Yinjian: “Kulungile, mamela nje. Ndiza kuvumela umntu ukuba ayenze. ”
Lu Xi: “ndithetha ukuthini? Awucingi ngayo? ”
UQin Yin uncume ubuso bakhe: “intsebenzo yakho namhlanje intle kakhulu. Kuyandivuyisa ukuva kuwe. ”
Izinto ezinje azidingi kujongwana nazo nguQin Yinjian, kwaye abo baphantsi kwakhe banokujongana nokucoceka, kodwa uzimisele ukuthatha ixesha lokumamela izimvo zikaLu Xi. Into uLu Xi afuna ukuyenza, uyakuyenza. Njengokuba uluvo lukaLu Xi luhambelana naye, wanelisekile.
U-Lu Xi wongeze wathi: “Lo mba ubangelwa ndim. Ukuba ungayisebenzisa indawo yam, vula nje umlomo wakho, kwaye ndiza kusebenzisana nawe. Isikhumbuzo esishushu, nokuba ndenza ntoni ngeli xesha, ndingumxhasi onobuhlobo, kwaye akukho mrhumo wokungena, ke umongameli uQin akufuneki abe nembeko kum. "
UQin Yinyi: “Ndikhaphe ndiye kwi-ofisi yokubhalisa umtshato ndiyokufumana isiqinisekiso.”
Ngokukhawuleza u-Lu Xi utshintshe isihloko: "by the way, Lu Lu kufuneka athathe amayeza. Ndiza kuya kulitya iyeza kuqala. ”
UQin Yin urhuqe uLu Xi wathi, “Lu Xi, ndizimisele.”
U-Lu Xi wancuma kakubi: “Ndizimisele, nam.”
UQin Yinjian: "Lu Xi!"
Lu Xi: "undithembisile ukuba uzakundinika ixesha lokuba ndiyicinge, ngokukhawuleza oko ayilolizwi?"
Ewe wamthembisa ukuba uza kumnika ixesha lokuba acinge ngayo kancinci. Angathini ukuguquka?
Phantsi koLu Xi, uQin Yinjian wasikhupha kancinci isandla: “Lu Xi, le bendiyithetha kuwe ihlala isebenza.”
Uyakhumbula ukuba wathi uza kumkhathalela ubomi bakhe bonke?
U-Lu Xi uyawakhumbula onke amazwi u-Qin Yinjian awathethileyo, kodwa ukusukela ngala msitho, akaphindi abenalo uluvo malunga neQin Yinjian, kungoko aqhubeke nokwenza ngathi, “Andiyirobhothi, ndingakukhumbula njani uthe? ”
Ubuso bukaQin Yinjian bajika baba mnyama, wabuya wabanda okuqhelekileyo.
“Ndizokukhathalela uLu Lu, okanye ungahamba uyokwenza umsebenzi wakho kuqala,” utshilo uLu Xi
UQin Yin khange athethe kwaye akabakhathalelanga abantu.
Xa wayenomsindo, wayengathethi. ULucy wayemazi. Ngeli xesha, wayekude kuye. Emva kokuba nomsindo, uya kuphila.
UQin Yinjian ubukele uLu Xi engena kwiwadi yomntwana omncinci, engasamhoyi, kwaye echole amashiya engakholisekanga: “ukuba unayo encinci, awudingi ukuba mkhulu. Ngaba amanina anje? ”
Abafazi kwiintsapho zabo abanjalo.
Umzekelo, umama wakhe uJane wabaleka, nokuba banabo aba bantwana, uhlala exhalabile yimeko kayise. Udadewabo omdala uQin lelan uyafana. Nokuba uxiaolele, ubudlelwane nomyeni wakhe busafana neglu. Ngapha koko, umakazi wakhe omncinci kunye nonyana wakhe basetyenziselwa ukuxhaphaza.
"Ah - Lu Lu -"
UQin Yinyi wayecinga ukuba ngequbuliso kwakhala u Lu Xi egumbini. Emva kokuva ilizwi likaLu Xi, uQin Yinyi, owayesoloko ezolile kwaye ezithembile, waphantse wabaleka wangena emnyango okokuqala: “Lu Xi, kwenzeke ntoni?”
“Umhlaba nomhlaba uQin Yinjian Umhlaba nomhlaba ……” uLu Xi woyika kakhulu kangangokuba ulwimi lwakhe lwabhideka. Wambamba wamqinisa uQin Yinjian wathi, “khawulezisa Gcina umhlaba wam, akanakuba uxakekile, akanakuba uxakekile, ndincede ndimsindise, umsindise
“Lusi, hlisa umoya!” U-Qin Yin uqwalasele nje umfo omncinci kwisibhedlele. Ubuso bomfo omncinci babumhlophe, phantse bumhlophe njengeqweqwe elimhlophe elikwibhedi yesibhedlele. Umfo omncinci uvale amehlo. UQin Yin uphengulule ngesandla sakhe, kwaye umphefumlo wakhe ubuthathaka kangangokuba kunzima nokukubona.
UQin Yinjian wacofa kwangoko umnxeba wokucela uncedo: “umntwana uqulekile. Thumela umntu ngoko nangoko. ”
Ukubona ukuba umntwana akaphefumli, uLu Xi wothukile. Ulibale ukuba kukho umnxeba weqhosha loncedo lokubiza oogqirha nabongikazi okokuqala. Emehlweni akhe, uLu Lu Lu wayengekho zingqondweni: “Lu Lu, ungothusi uMama, Kulungile? Ngaba ungavula amehlo akho ukuze ubone umama kwaye ube nelizwi naye
U-Qin Yin utsale uLu Xi: "Lu Xi, yehlisa umoya, umntwana uzakuphila."
U-Lu Xi akakuva nto: “Lu Lu, thetha nomama, Kulungile? Umqumbele uMama xa ungathethi? U-Lu Lu, uMama uthembise ukuba okoko nje uvukayo, uMama uza kuvumela amapolisa ukuba athathe umntu ombi kwaye angaze amvumele ukuba avele ecaleni kukaLu Lu kwakhona. "
Ukuva amazwi kaLu Xi, ubuso bukaQin Yinjian batshona kwakhona, kodwa ngenxa yesifo esibi somntwana, akazange ahlaselwe.
Oogqirha nabongikazi bafika ngexesha: “Mongameli uQin…”
UQin Yinjian uthe, “bonisa abantwana. Khumbula, nokuba usebenzisa yiphi na indlela, kufuneka umnyange umntwana. "
Oogqirha abaliqela bahlunguzelisa iintloko zabo kwaye bakhawulezisa umhlaba bahlangula.
Ukubona ukuba uLu Lu akaphenduli, uLu Xi woyika kangangokuba waluma imilebe yakhe ngokuqinileyo. Wayefuna ukubuza into awayengoyiki ukuyibuza, kuba wayesoyika ukuva iindaba ezimbi.
UQin Yin wolule isandla wasiqinisa wasiqinisa: “Lu Xi, ungazenzakalisi. Ndiyakuqinisekisa, umntwana uzakuphila. "
ULucy uvale imilebe yakhe akathetha. Wayesoyika ukuba angakhala xa evula umlomo.
Nguye kuphela osapho lukaLu Lu kwaye kuphela kwenkxaso yokomoya. ULu Lu ugula kakhulu ebhedini. Angashiya njani isikhundla kuqala? Ngokuqinisekileyo akunjalo.
UQin Yinjian uthe: “Lu Xi, ngoku umntwana akasenguye wedwa, akasengomntwana kamama kuphela. Logama ufuna, okoko nje umntwana efuna, ndingathanda ukukhulisa umntwana kunye nawe. ”U-Lu Xi usabambe imilebe yakhe ngokuqinileyo kwaye akathethi nelimdaka. U-Qin Yinjian ubenamathandabuzo nokuba uyamva xa ethetha okanye hayi: "Lu Xi, ndikholelwe, uLu Lu uzolunga, kuzolunga."
Kodwa uLu Xigen akayivanga le nto wayethetha ngayo uQin Yinjian. Emehlweni nasentliziyweni yakhe, uLu Lu Lu ebelele ebhedini yasesibhedlele.
UQin Yinyi khange aphinde amcenge. Wahlala noLu Xi kwaye akazange ashiye isiqingatha sinyathelo.
Ngethamsanqa, emva kokuhlangulwa ngugqirha, uLu Lu wavuka kancinci kancinci.
“Umhlaba nomhlaba ……” Ukubona lo mfana uvuka, uLu Xi uleqa ecaleni kukaLu echulumancile kwaye ubambe isandla sakhe esincinci entendeni yesandla sakhe, “Nyana Nyana, kufuneka ulungile, ungoyikisi uMama, Kulungile? "
“Mama, sukukhala!” U-Lu Lu ufuna ukuphakamisa isandla sakhe ukuze asule iinyembezi kumama, kodwa umfo omncinci ubuthathaka kakhulu ukuba angaphakamisa isandla kwaphela. Uyakwazi ukubukela iinyembezi zikamama zizehlela kuye, “mama, uLu Lu akafuni ukuba ube lusizi.”
“Kulungile, uMama akakhathazeki.” U Lu Xi wosule iinyembezi wazama ukubonisa uncumo. “Logama uLu Lu wam elungile, ndingalunga. Ke, Lu Lu Baobei, kufuneka ulunge. Ingaba uyazi?"
“Kulungile,” watsho uLu Lu
U-Lu Xi wamanga: “masitsale umlobothi wakho!”
Umlomo kaLu lunu: “Mama, ngumntwana.”
Lu Xi: "okoko nje ndinokulwenza ngcono usana lwam, andoyiki ubuntwana."
U-Lu Xi woyika ukuba u-Lu Lu Lu akakwazi ukuqhubeka. Unoloyiko lokuba uLu Lu angancama unyango lwakhe, kungoko angamgcina uLu Lu Lu ehamba ngoluhlobo.
Kwangelo xesha, uQin Yingu ufunda kwagqirha malunga nesiqa sikaLu Lu ngequbuliso namhlanje.
Kwimizuzu embalwa edlulileyo, inkwenkwana encinci kaLu Lu Lu isenamandla okumbiza kakubi. Igama lakhe yayinguLu Xi, kodwa wahlala ngaphandle ithutyana. Inkwenkwe ka Lu Lu yawa ngesiquphe isiqaqa. Kwenzeka ntoni ngeli xesha?
UQin Yinjian uza nemibuzo, kwaye ugqirha kaLu Lu ophetheyo naye unike uQin Yinjian impendulo elungileyo: “Mongameli uQin, isifo sikaLu Lu silawulwe, kwaye ayizukuba mandundu imeko yakhe ekhokelela ekubeni afe isiqaqa. Ukuba andiphazami, ngumthwalo wakhe wengqondo omenza athelekise. "
UQin Yinjian: "bantwana abancinci kangaka, yazi ukuba yintoni umthwalo ngokwasemphefumlweni."
Ugqirha obekhona uthe: “Ewe, kusengqiqweni ukuba umntwana omncinci kangako angaqondi nakuphi na uxanduva lwengqondo, kodwa kwinkqubo yokumhlangula sabona into ethile. U-Lu Lu wayehlala efinge iintshiya engazi, ngokungathi kukho into ayoyikayo. ”
UQin Yinjian: "boyika ntoni abantwana abancinci?" Ugqirha obekhona uye wongeza wathi: “Xa bendinyanga uLu Lu kwezi ntsuku zimbini, ndiye ndafumanisa ukuba lo mntwana wohluke kakhulu koontanga bakhe. Abanye abantwana abaphakathi kweminyaka engama-30 bayalila xa begula. Bafuna ukwazisa umhlaba uphela ukuba boniwe. Emva koko uLu Lu, ophethwe ziintlungu, uzakuluma amazinyo. Akaziphathi njengomntwana oneminyaka emithathu kwaphela. Unengqiqo kakhulu ukuba abe yinto eqhelekileyo. "
UQin Yinjian: "ungathini?" "Abantu abaninzi banokucinga ukuba yinto entle ukuba abantwana babe nolwazi ngaphezu koontanga babo, kodwa akunjalo," utshilo umsitho. Abantwana kweli qela leminyaka kufuneka babe msulwa kubantwana abakule minyaka yobudala. Kuya kufuneka badlale ngendlela abathanda ngayo, kwaye bazimisele ukuthanda kwabo, ukuze bakwazi ukukhulula indalo yabo. Abantwana abasebancinci nabanengqondo bahlala bebangelwa zizinto ezininzi zangaphandle, hayi kuba bezelwe benengqondo. "
Xa kufikwa kumxholo wokuba yindoda enengqondo, uQin Yin unokuqonda okujulile. Wayengumntwana onengqondo ukususela ebuntwaneni. Ekuqaleni, xa wayekhulile kwaye enengqondo kunontanga bakhe, abantu babemdumisa ngokuqonda kwakhe. Emva kwexesha, ngokuthe ngcembe, ukuqonda kwakhe kwenza abantu bacinga ukuba ufanelekile ukuba nengqondo.
Uninzi lwexesha, abantu entsatsheni bayamhoya kuba unengqondo kakhulu. Ukuphela kwemfazwe, ehlala ibangela ingxaki, kukugxininisa kwintsapho yonke.
Kwintliziyo kaQin Yinjian, wavumelana nogqirha ophetheyo kakhulu. Akulunganga ngomntwana ukuba aqale kwangoko ukuba aqonde: "luthini uluvo lwakho?"
Ugqirha owayesiza apho wathi: “Mnu. UQin, ndicebisa ukuba ufumane ugqirha wengqondo ongcono ukuze athethe noLu Lu, ukuze abantwana baphinde babenomdla onjengomntwana. ”
Ukufumana ugqirha wengqondo olungileyo wokunceda uLu Lu akayonto kaQin Yinyi. Ngoku kuLu Xi ukubona ukuba uyakholelwa na ukuba uluvo lwengqondo lukaLu Lu Lu alulunganga kwaye ukuba uzimisele ukuvumela ugqirha wezengqondo ukuba akhokele uLu Lu.
UQin Yin wawangawangisa esithi: "uyokwenza umsebenzi wakho."
U-Qin Yinjian ufumana uLu Xi kwakhona kwaye aphinda-phinda oko ugqirha wathi kuye kuLu Xi.
U-Lu Xi uye waqonda ubunzulu bengxaki emva kokumamela. Ngapha koko, u-Lu Xi wayenoluvo olungaqondakaliyo lokuba u-Lu Lu Lu wayenengxaki zengqondo, kodwa kuba wayexakekile esenza imali, wayengenandaba nayo, ngenxa yoko wayilibazisa.
Ngoku mamela uQin Yinjian, uLu Xi naye unexhala: "Ndizakufumana ugqirha wezengqondo oza kumnceda uLu Lu amkhokele, ukuze angahlali kuloyiko lokuswelekelwa ngunina yonke imihla."
UQin Yin wamkrwaqula uLu Xi wathi: “Lu Xi, uba ngumama njani?”
“Lishishini lam ukuba ndibengumama njani. Awunakujongana nayo. ” U-Lu Xi uyavuma ukuba ngumama ongafanelekanga, kodwa ityala lakhe kunye nokuzihlambalaza konke ku-Lu Lu. Aba bantu bangaziwayo abangazi kwanto banaso nasiphi na isiqinisekiso sokuthetha ngaye, ke isimo sakhe sengqondo kuQin Yinjian sibi kakhulu.
Ubuso bukaQin Yinjian bajika baba mnyama wathi: “Uxolo.”
U-Lu Xi uyazi entliziyweni yakhe ukuba uQin Yinjian umncede kakhulu. Yena noLu Lu ohlangulayo osindisa ubomi akufunekanga bamcaphukele, nokuba unomsindo kangakanani. Kodwa ukongeza ekubeni nomsindo kunye naye ukuze alususe uloyiko kunye noloyiko entliziyweni yakhe, akazi ukuba ngubani omnye umntu anokumfumana.
Nangona ubudlelwane phakathi kukaQin kunye naye butshatile ngoku, usakholelwa kuye kwaye uxhomekeke kuye.
U-Lu Xi waluma imilebe: “Mongameli Qin, ndiyaxolisa! Andifanelanga ukuba ndikucaphukele. "
Ngeli xesha, uQin Yinjian wayengenakukhathalela ngaye. Uthe, “Ndizakulungiselela imicimbi yengqondo. Sukuba nexhala ngezinye izinto kule mihla. Khathalela uLu Lu noLu esibhedlele. ”
U-Lu Xi wanqwala, “enkosi!”
Isantya sikaQin Yinjian sokwenza izinto sikhawulezile. Ngelixa uLu Xi esacinga ukuba loluphi uhlobo lwesazi ngengqondo anokulufumana ukunceda uLu Lu amkhokele, ugqirha wezifo zengqondo uQin Yinjian oqhakamshelane naye ufikile emnyango wabo. Ixesha kukusa emva kwencoko yabo.
Xa ugqirha wengqondo weza, uLu Xigang wayesandula ukuphekela u-Lu Lu i-gruel. Xa yeva umntu enkqonkqoza emnyango, wabona intombazana entle imi emnyango wewadi. Ukubona umfazi omhle kunye nomoya, u-Lu Xi waphendula kuqala kukuba intombi ka-Qin Yingu yeza kuye.
U Lu Xi wajonga lo mama washiywa zingqondo. Ngesiquphe, weva lo mfazi esithi, “Molo, uyaba nguNkosazana Lu Xi?”
"Ndinguye." U-Lucy wanqwala ngokungafanelekanga. “Uxolo, ingaba unjalo?” Umfazi wancuma waxela kusapho lwakhe: “Igama lam ndinguZeng Zeng. Ndingugqirha wezifo zengqondo ogxile kwiingxaki zabantwana. UMongameli Qin undicelile ukuba ndize apha. "
Ugqirha wengqondo omncinci kwaye omhle.
I-OS yangaphakathi kaLu Xi: “Ingcali yengqondo encinci ingamnceda uLu Lu?”
Ukubona iingcinga zikaLu Xi, uZeng wancuma ngokungathandeki: “Nkosazana Lu, ukuba unemibuzo malunga nomphathi wam, ungathetha nam kuqala ukunqanda amaxhala.”
“Ingenzeka njani…” uLu Xi wancuma kakubi. “Ugqirha Zeng, uLu Lu Lu ungumntwana owazileyo kusapho lwam. Uyaboyika abantu angabaziyo, kodwa ukuba nje uzama ukuba nobulali kunye naye. ”
UZeng Zeng wanqwala: “Nkosazana Lu, ukuze ungawunyusi umthwalo kaLu Lu ngokwengqondo, awufuni kundibiza ngugqirha, ndibize nje ngokuba nguZeng, nto leyo ilungile ukuba ndenze umsebenzi wokulandela.”
U-Lu Xi wancuma: “Zeng Zeng, Molo! Nditsalele nje u-Lu Xi, kwaye u-Lu Lu wam uza kukuhlupha kwixa elizayo. "
Ngenye imini wolula isandla sakhe wanyikima noLu Xi: “Molo, Lu Xi!” Emva kokubulisa, aba babini badibana. Bakhe bathi, “Lu Xi, eneneni, ayikokundikhathaza, kodwa kukusebenzisana. Umsebenzi wam ulula kakhulu, oko kukuthi ukuncokola nabantwana kunye nabazali babo. Eyona nto ibalulekileyo yintsebenziswano yabazali babo.
”“ Kudala-dala, ukuba ufuna uncedo lwam, yitsho nje ukuba ndiza kwenza konke okusemandleni ukusebenzisana nomsebenzi wakho. ”
UZeng wake wathi ngoncumo, “Ndonwabile ukuba nawe.”
U-Lu Xi uthe: “U-Lu Lu Lu ngumntwana wam, andikwazi ukubuza impilo yakhe yengqondo, ndingavumi njani ukusebenzisana.”
UZeng wakhe wathi: “Ukukhula komntwana kunento yokwenza nabantu abasondeleyo kuye. Ukuncokola nabantu abakufutshane nomntwana nako kunokufumana iingxaki. ”. Ke namhlanje, andikhangeli uLu Lu, kodwa ndizothetha noMiss Lu kuqala. "
U-Lu Xi wamkele ngokukhawuleza, "ufuna ukuthetha ngantoni?"
UZeng Zeng: “ngaba uMiss Lu uyamthanda utata kaLu Lu?”
Nje ukuba ubuzwe umbuzo wokuqala, wawumiliselwe ngokuqinileyo entliziyweni kaLu Xi. Kubuhlungu kakhulu uLu Xi engazi ukuba uza kuyiphendula athini.
Ngaba angamxelela uZeng ukuba yingozi ukuba uLu Lu eze kulomhlaba?
Ebekwazi ukuxelela uZeng ukuba akazazi nokuba ngubani utata ka Lu Lu?
Ngaba angamxelela utata wakhe, owayekhe wamthiya uLu Lu, ukuba akanakunceda ukukhupha isikhumba sakhe ukuba simqhekeze kwaye asele igazi lakhe?
Hayi, ayingabo bonke.
U-Lu Xi ebengafuni kukhethwa kwimbali yakhe eyadlulayo wayibeka phambi kwamehlo abanye abantu ngendlela enegazi ukuze bambone ngathi sisilo.
Uzama ukulibala elidlulileyo elibi.
Kodwa okoko wabona uLu Lu, ebengenakubulibala ubukho bukaLu Lu umkhumbuza ukuba ixesha elidlulileyo awonqeni ukulikhumbula liyinyani. Yenzeka, hayi ephupheni lakhe.
Akukho mfuneko yokuba uLucy aphendule. Ukujonga indlela awaphendula ngayo, uyayazi impendulo.
Iingxaki zomntwana ngengqondo, eyona ixhaphakileyo kungenxa yeengxaki zosapho, kwaye iingxaki zosapho phakathi kwabazali ngaphandle kothando yeyona nto iphambili.
Ndibuze nje umbuzo. Wayeqikelela ukuba zivela phi iingxaki zengqondo kaLu Lu Lu, kodwa ngekhe afikelele kwisigqibo ngokulula. Kwafuneka aqhubeke nokufunda ngakumbi ngoLu Lu ukuze ancede abantwana bakhe ngcono.
Wakhe wabuza, “uMiss Lu akamthandi utata kaLu Lu, khona kutheni wazala uLu kunye?”
Imibuzo kaZeng Zeng ithe ngqo, kanye njengebhombu eqhuma entliziyweni kaLucy, emenza othuke, kwaye emenza ukuba amise iqokobhe lokukhusela kubantu bangaphandle: “Gqirha Zeng, ulapha ikakhulu ngenxa kaLu Lu Lu. Singathetha ngemicimbi kaLu Lu Lu Lu? Ungasoloko undibuza ngayo. ” Isimo sika Lu Xi ngotata ka Lu Lu Lu besingalindelekanga. Wayecinga ngobudlelwane obubi phakathi kukaLu Xi notata kaLu Lu Lu Lu, kodwa akazange acinge ukuba uLu Xi wakhankanya ukuba utata kaLu Lu Lu Lu uza kuba kwimeko yokuzikhusela. Wazifihla kwigobolondo lakhe lokukhusela, ukuze kungabikho mntu unokungena entliziyweni yakhe.
Mhlawumbi yile ngongoma. Ngenye imini wathi, “Lu Xi, awufuni kuthetha ngeshishini lakho, kwaye andinakubuza ngaphezulu. Kodwa ndiyathemba ukuba ungayiqonda into yokuba indlela ocinga ngayo notata kaLu Lu Lu ibonakala ngathi ayinampembelelo kuLu Lu Lu. Ngapha koko, inefuthe elikhulu. Mhlawumbi khange uthethe nto ku-Lu Lu ngamaxesha aqhelekileyo, kodwa intetho yakho iyakukungcatsha kwaye uvumele u-Lu Lu ayiqonde. Isayikholoji yomntwana inovakalelo ngakumbi kunabanye abantwana, waqaphela kodwa akatsho, ngokuthe ngcembe eqokelele entliziyweni, izakuvela ngoku ezi meko. "
U-Lu Xi wayesazi ukuba le ayithethileyo ichanekile, kwaye iimvakalelo zakhe zamchaphazela u-Lu Lu. Isizathu sokuba uLu Lu abe enje ayinakwahlukaniswa naye, kodwa akanasibindi sokumxelela ukuba ajongane nayo. Ngesinye isihlandlo wathi: “Lu Xi, sukundichasa. Xa bendiphathisiwe ukukunceda, bendifuna ukuthetha nawe. Ayikho enye imbono. Awunyanzelekanga ukuba uzilinde nxamnye nam. Ndingathanda nokuthi eneneni, ezinye izinto ziya kudlula. Musa ukusoloko uzibeka entliziyweni yakho. Nguwe odiniweyo entliziyweni yakho. Kungcono ukuthetha ezo zinto zimbi kwaye ujongane nesibindi. Ngelo xesha, uya kufumanisa ukuba yonke into yexesha elidlulileyo injengale, ingeyonto imbi ngokucinga kwakho. "
La magama ngamagama uLu Xi acinga ngawo yonke imihla. Ngoku bathethwe ngomlomo kaZeng, nto leyo eyenza ukuba uLu Xi azaliswe zizilumkiso: “Ungubani? Ufuna ukuthini kum? ”Wakhe wathi:“ Lu Xi, sukuba nemincili. Ngokwenene ndingugqirha wezifo zengqondo ofunyenwe nguMongameli uQin. Ndisandul 'ukuthetha nawe. Ndikugweba kuphela ngokweemvakalelo zam. Andazi ukuba kwenzeke ntoni kuwe ngaphambili, kwaye andifuni kwenza nto kuwe. Injongo yam ilula kakhulu. Ndiphathiswe abanye ukuba benze izinto. Ndiyathemba ukuba ndingaphila ngokunyaniseka kwabahlobo bam kwaye ndenze abantwana bakaLulu bonwabe njengabantwana abaninzi abalinganayo. "
ULucy akazange akholelwe. “Akukho kwanto uyaziyo?”
UZeng Zeng: "Bendingazi kwanto ngaphambili, kodwa ngoku kubonakala ngathi ikhona into endiyaziyo.". Kodwa ungakhathazeki, Lu Xi. Andizukuxelela mntu ngengxoxo yam nawe namhlanje. "
"Wazi ntoni wena?" Imood kaLu Xi ibinemincili kancinci. Uye wajonga uZeng ngononophelo, “nguwe lo uQin Yingu ufunyenweyo? Ngaba wayefuna ukuba ukhuphe into emlonyeni wam? Yintoni ngokwenene afuna ukuyazi? ”Ukubona ukuba uLu Xi uzikhusele kangaka kuQin Yinjian, waba nento angayincedanga:“ Lu Xi, kazi awuqondi ncam malunga neQin Zong? UMnu Qin wandicela ukuba ndikhokele uLu Lu. Wayengenayo enye imiyalelo. Ngapha koko, wonke umntu unokubona ukuba uMnu Qin uhlala ekukhathalele. Ucinga ukuba unentliziyo embi kanjani kuwe? "
Iinjongo zikaQin Yinjian ngokubhekisele kuLu Xi zicacile kuLu Xi, kodwa ngenxa yokuba wayekhe wakhankanya into eyadlulayo uLu Xi angafuni ukuyikhankanya kubomi bakhe bonke, nezinto ezifihlakeleyo entliziyweni yakhe, wayebathatha bonke abantu abamngqongileyo njengababi. umntu.
Uzikhusela ngalendlela. Ngokuchanekileyo kungenxa yokukhusela kwakhe ngononophelo kwimfihlo yakhe athi atyhile uloyiko lwangaphakathi kuyo yonke indawo. UZeng wakubona oko emehlweni akhe: “Lucy, asiyichazi into yokuba kukho abantu abangalunganga emhlabeni, kodwa kufuneka sikholelwe ukuba baninzi abantu abalungileyo kunabantu abangalunganga. Ingakumbi kubantu abalungileyo abasingqongileyo, balungile kuthi, ayisosizathu sokuba sibaphathe kakubi kwaye sibathandabuze. Ngapha koko, ubomi kukwazi indlela yokukhetha nokukhetha. Yintoni ekufuneka ilibalekile kufuneka ilibale. Oko kufuneka kushiywe kufuneka kushiywe. Ungaphoswa yinto ngaphambi kokuba uzisole. "
U-Lu Xi, owakhe wathi uyayazi, uhlala esenza kwa loo nto. Uphume kulawulo ngokupheleleyo ngenxa yaloo nto. Ngoku uzolile: “Uxolo!”
UZeng Zengwen uthe: “Lu Xi, ndiyaxolisa ukuba awuzukundixelela. Kuya kufuneka uyitsho kuMongameli uQin. Ukuyibeka ngendlela engeyiyo, wena noLu Lu akunanto yakwenza nam. Oyena mntu ukukhathalele ngokwenene ngumphathi jikelele uQin ondiphathise ukuza. "
Wayenyanisile ukuba uphathiswe zonke iinkxalabo malunga nonina nonyana.
Ngaphandle kukaQin Yingu, uLu Xi wayesazi ukuba yena kunye naye ngekhe babenethuba lokudibana. Ekugqibeleni, uQin Yingu wayengoyena mntu ukhathaleleyo ngonina nonyana. Le ndoda yema ecaleni kwakhe ukuze imkhusele ngaphandle kokubuza isizathu.
U-Lu Xi ulandela imilebe yakhe: “Zeng Zeng, enkosi ngokusikhumbuza kwakho. Ndiza."
“Ewe, ukuba unento ofuna ukuyithetha, musa ukuyifihla. UZeng wancuma wathi, “Lu Xi, ukuba awufuni kuthetha, masiyiyeke le ncoko yanamhlanje. Ngenye imini ufuna ukuqonda ukuba ufuna ukuthetha nam. Nditsalele umnxeba nanini na. "
Andizelanga kuzonceda u Lu Lu ukuba enze I counselling? Ngoku sele eza kuhamba engekahlangani noLu. U-Lu Xi uyabuza, “Zeng Zeng, awuthethi noLu Lu?”
"Phambi kokuba ndithethe noLu Lu, kufuneka ndazi ngakumbi ngawe, kuba abazali banefuthe elithe ngqo ebantwaneni babo," utshilo uZeng u-Lu Xi ebeyifihlile loo nto imbi ngaphambili, apho kungekho mntu unokuyiphatha, engathandi ukuvumela nabani na ukuba ambone elidlulileyo. Kodwa ukuba yenzelwe uLu Lu Lu, uLu Xi uzimisele ukuzama ukuyithetha, kodwa ufuna ixesha: “Zeng Ndicela undiphe ixesha elongezelelweyo. Ndiza kunxibelelana nawe emva kokuba ndiyifumene. "
UZeng wenjudo: “kulungile, ndiza kukulinda.”
Emva kokuba emkile uZeng, uLu Xi wabuyela egumbini wayokutyisa uLu Lu, kodwa ke kuba imeko yomfo omncinci yayingenathemba, kwaye nomdla wakhe wawungonelanga: “Mama, ukutya bekumuncu, uLu Lu Lu ebengafuni. ukuba sitye. ”
Ayikuko ukuba ukutya kuyakrakra, kodwa uLu Lu uthatha amayeza amaninzi kwezi ntsuku. Kukrakra ukutya nantoni na uLu Xi wayiva intloko yomfo omncinci enentliziyo ebuhlungu: “U-Lu Lu akafuni kuyitya ukuba akafuni. Umama ebesenzela uLu Lu ukutya okumnandi emini emaqanda. ”
ULu Lu ujonge kuLu Xi: “Mama, uLu Lu Lu ufuna ukutya amaphiko enkukhu ngecoke. Ungamenzela uLu Lu Lu amaphiko enkuku? ”
Lu Xiwen Judo: "Mama ukubuza ugqirha, ugqirha uthe angatya, mama emini ukuya eLu Lu do Coke amaphiko enkukhu?"
Iwadi ephezulu yesibhedlele i-Shengtian sisigumbi samagumbi amabini, iholo enye, ikhitshi elinye kunye negumbi lokuhlambela. Kukho zonke iintlobo zezixhobo kunye nezixhobo kulo, ezilungele kakhulu uLu Xi ukupheka uLu Lu Lu. Ixesha elide njengoko linokutya, uLu Xi uzimisele ukukwenzela uLu Lu.
U-Lu Lu uthe ngelizolileyo, "Kulungile Mama."
U-Lu Xi uchukumise intloko yakhe encinci: “u-Lu Lu ulele ithutyana. Umama uphume waya kubuza ugqirha. ”
U-Lu Lu wanqwala ngothando, ilizwi elipholileyo kunye ne-airway ethambileyo: "Kulungile."
U-Xila ugubungela umngxunya wentombazana encinci kwaye uyanga ngaphambi kokuba iphume.
U Lu Xi uphume kwi wadi ka Lu Lu Lu, wathatha izitya ebezisebenzile nezinqanda ekhitshini wayozihlamba, emva koko wacoca ikhitshi. Kusemva koko apho wafumana ixesha lokuya kugqirha. Kodwa xa efika kwigumbi lokuhlala, weva ukuba ucango luyangqubeka kwaye lutyhalelwe ukuvula. Umfana omncinci woyika isiqingatha sentloko yakhe wajonga eMpuma nasentshona yegumbi.
“Lele, nguwe?” U-Lu Xi uyalukhumbula olu hlobo lwenkwenkwana lunobubele. Wayedlala nabazali bakhe epakini okokugqibela, kwaye wathuthuzela abantwana bakhe. Ukumbona apha, uLu Xi wothuke kakhulu. “Lele, unjani apha?” Ngokubona ukubonakala kukadade wethu omdala umothukile kwaye onwabile, ubonakala ngathi uqhelene naye, kodwa akamazi uXiaolele weva intloko yakhe encinci kwaye wayicinga nzulu, kodwa akayikhumbuli apho adibana khona naye, ke Wabuza nzulu, “dade, uyandazi?
Ngaba sidibene? "
U-Lu Xi waya kwicala lika Lele wachopha phantsi, esiva kamnandi entlokweni yakhe: “kulungile, udade wethu uyakwazi, ulumkile, uyathandeka kwaye unobubele uLele omncinci. Ngoba, wawusithi uza kuba ngumhlobo olungileyo nodadewethu bonke ubomi bakho, ngoku awusamkhumbuli udade wethu? "
Ukuba watsho njalo, akazange akhumbule kwaphela.
UXiaolele wayengafuni ukumphoxa udade wabo, kodwa enyanisweni wayengakhumbuli ukuba umbone phi usisi omhle kangaka. Wayeneentloni kakhulu xa ezonwaya intloko: “dade, ndiyaxolisa! Andikukhumbuli. "Ayinamsebenzi. Usisi omdala ukhumbula ukuba wayekhe wanomntwana onentliziyo entle ukumnceda. ”Kulula ukuba abantwana bazilibale izinto. Angamkhathalela njani uLu Xi ngaye? Uye wajonga ngasemva uLele akababona abazali bakaLele. “Lele, wohlukene nabazali bakho?” "Hayi ncma. ULele othandekayo ngumntwana kamama notata. Bayamthanda uLele kakhulu. Baza kujonga kum xa bephuma. Asoze andiyeke ndihambe. ”ULele ukhulele kusapho olunothando. Wayekholelwa ukuba abazali bakhe bayamthanda kwaye soze bamshiye, ke wayeqinisekile.
Andizange ndibone banye abazali emva kwakhe, kwaye andizange ndohlukane nabo. U-Lu Xi uphinde wabuza, "Kutheni ulapha wedwa?"
Umalume wam otya inyama wandinyanzela ukuba ndize. ” U-Lele ulusizi ukukhankanya oku. Akafuni ukuba yedwa nomalume wakhe onokutya abantu. Kodwa umalume onokutya abantu uthe uzomkhupha ayodlala naye. Kuyamangalisa ukuba utata wakhe, umama wakhe kunye nomakhulu wakhe bavumile.
Umama notata nomakhulu akufuneki bacinge ngayo. Ungathini xa umalume ezisa phandle ukuba atye? Ukuba umalume wakhe angamkhupha endlwini amtye, abazali bakhe kunye nomakhulu bebengayi kuba mhle kangako.
Ngaphandle kwencinci yakhe entle, akukho mntu uya kubenza bonwabe, kwaye ubomi babo buya kuphulukana nobumnandi obuninzi.
Musa ukumbuza ukuba kutheni esazi kangaka? Wayengasoze ayitsho lonto kuba abazali bakhe babedla ngokumxelela ukuba ulusana losapho, wayeyona ndima ibalulekileyo kusapho, kwaye ngekhe aphile ngaphandle kwakhe.
“Utat'omncinci utye uLele wenze ukuba uLele eze?” Ukumamela xiaolele's Tongyan and Tongyu, Lu Xi wayevuya kakhulu ukuba wayefuna ukuhleka. Uye wacofa ubuso bakhe obuncinci wabuza, “Utatomncinci kaLele akanyanzeli uLele kuphela, kodwa utya nabantu? Ngaba woyike ngokwenene? "
“Dade Shh…” uLele ukhuphe isandla sakhe wagubungela uLu Xi. “Umalume wakhe unomsindo ombi. Akanakutya abantwana kuphela kodwa nabantu abadala. Xa uthetha kakubi ngaye, musa ukuyiva, kungenjalo uya kuyitya nawe. ”
“Ewe, udade wethu akazukutsho.” U-Lu Xi no-LeLe babonakala benoloyiko, “ke uLele angaxelela udadewabo ngelizwi eliphantsi, kutheni umalume wakho otya abantu ekunyanzela ukuba uze apha?”
“Dade, kubuhlungu oko. ULele akafuni nokuyikhankanya. ” Ewe kulungile ukuba ungathethi ngale nto. Xa sikhankanya uLele, sivakalelwa kukuba asisengabo abathandekayo bosapho lwethu. Bangazithumela njani iintsana ezintle kangaka kwihlosi. “Kulungile, uLele akafuni kuthetha ngodadewabo. Kodwa uLele akakwazi kuzimela kwigumbi likadadewabo. Ukuba umalume wakho akakufumani, uya kuba nexhala kakhulu. ”U-Lu Xi ukhokela uLele kwaye uceba ukuthumela umfana omncinci ukuba aphume. Umalume wakhe odla inyama kufuneka angacingi ukuba ungumqweqwedisi womntwana.
“Dadewethu omdala, ndizele ukufihla umalume wam. Akumelanga undifumane, okanye uza kunditya. ” UXiaolele ubalekile apha xa umalume wakhe engaboni. Wayengafuni ukubuyiselwa kumalume wakhe kwakhona. Ukuba angaphinde awele ezandleni zikayisekazi, angadliwa.
emva kwakhe, ngequbuliso kwehla isikhohlela. Ukuva umzimba kaXiaolele ungcangcazela, wakhawuleza wangena ezingalweni zikaLucy wambamba wamqinisa wathi: “dade, ndincede, ungavumeli umalume otya abanye abantu andibambe.”
Ukujonga le ndoda imnyama phambi kwamehlo ayo, u-Lu Xi khange akwazi ukuzibamba waqhuma ngoncumo: “malume ngubani otya abantu? Ha ha ha uMongameli uQin, kuyacaca ukuba ayisiyiyo kuphela into endicinga ukuba ubuso bakho obukhathazayo buyothusa, kodwa noxiaolele ucinga ukuba ubuso bakho obubandayo buyothusa. "
ULele uphakamise intloko ezandleni zikaLu Xi wajonga eQin Yingu. Wabona ukuba uQin Yingu ubuso bakhe bebubi kunakuqala. Uye wamanga uLu Xi ngokuqina: “dade, uyamazi umalume wam otya inyama? Awuyi kunditya naye, andithi? "ULele ukhululekile. Udadewethu uyakukhusela kwaye angavumeli utatomncinci atye inyama yakho. ” U Lu Xi wambetha emqolo uLele, wamthuthuzela kamnandi wajonga phezulu uQin Yingu. Ukubona ubuso obubi bukaQin Yingu, uLu Xi wancuma kwakhona, “Mongameli uQin, sukubambelela kobunye ubuso, kulula ukoyikisa abantwana.” "Kuko oko. Ubuso bukayisekazi buyothusa. Uyoyika kwaye wonwabile. ” Ukuva isiqinisekiso sikaLu Xi, uLele waphinda wangena ezingalweni zikaLu Xi wazama ukungxolisa umalume wakhe. Kodwa wayengalindelanga ukuba uQin Yinjian angamxhwila ezingalweni zikaLu Xi ngomzuzu olandelayo. UQin Yinjian uqhubekile
ikhola yakhe kwaye wathi "izinto ezimbi ngam ngasemva?"
ULele wakhaba wazama ukubaleka, kodwa uQin Yinjian wamkhaba kakhulu. Iinyawo zakhe zazingakwazi ukufikelela emhlabeni, nto leyo eyamenza wakhala: “umalume wam sele eza kutya uLele, dade, ndincede, nceda uLele…”
UQin Yin wamwola waqhwaba isinqe sakhe esincinci ngesandla sakhe esikhulu: “Mfondini, kudala ndisithi umalume wakho uzakutya abantu imini yonke. Ndizokubonisa namhlanje. Yabona uba andinokwazi ukhafula emveni kokutya umntana. "
Ngaphambili, wayecinga nje ukuba umalume wakhe uzakutya abantu, kodwa akazange ambone umalume wakhe esitya abantwana, ngoko ke wayengoyiki. Namhlanje, akuva ukuba umalume wakhe ufuna ukumtya nyani, woyika wade walila kakhulu, esula iinyembezi ekhwaza esithi: “Nceda Tata! Mama nceda! Nceda umakhulu! "
Abantwana babanye babesoyika ukukhala. UQin Yingu wayengenacebo lokuyeka. U-Lu Xi ebengasayiboni. Ukhawuleze waxhwila uLele ezingalweni zikaQin Yingu wathi, “Qin Yingu, uphambene? Awungekhe woyikiswe ngumntwana omncinci kangaka. "
Emva kokukhwaza uQin Yinjian, uLu Xi wambamba umntwana ezandleni zakhe wambetha kancinci emqolo. “Lele, ungoyiki. Usisi okhulileyo ulapha kwaye akazukuvumela abanye bakwenzakalise. Nokuba umalume wakho akanakukwazi. ”
U-Lele uthambise kabini ezandleni zikaLu Xi, ngequbuliso uyekile ukukhala, wajonga phezulu wathi kuLu Xi, "dade, unencasa kamama."
U-Lu Xi khange aqonde: “…”
UXiaolele wongeze wathi: “Umama wonwabile, ulele ezingalweni zikanina, uLele akoyiki kwanto.”
U-Lu Xi watsho ngoncumo, "kuba udadewethu naye unomntwana ekhaya, ke udade wethu ukwangumama."
ULele unemincili: “dade, ungamthatha uLele ayokubona umntwana wakho?”
ULucy wanqwala: “kunjalo. Ulapho ngaphakathi. Masingene sizombona. "
U-Lele wanqwala, kwaye wenza izikhalazo malunga neengalo zikaLu. Uye wacela u Lu Xibao ukuba aye ewadini ka Lu angene kweligumbi. Lo mfo mncinci usamlibele umalume wakhe uTucao: “Utatomncinci lixoki, ukhohlisa umntwana ngokukhethekileyo. Ayintle kwaphela. ULele akafuni kudlala naye. ”
Lusi: kulungile asizudlala ngaye
ULele wonwabile: “iseyeyona intle udadewethu. Usisi omdala umhle, unentliziyo entle, kwaye uyamthanda uLele kakhulu. "
Lu Xi: kunjalo Lele
Ukumamela incoko phakathi kukaLu Xi noLele, imilebe kaQin Yinjian iphakanyisiwe kancinci. Wayengalindelanga ukuba uLu Xi usengabhenela kuLele, umfana omncinci okrelekrele. Ukusuka kwincoko yabo ngoku, umfo omncinci unike uLu Xi uvavanyo oluphezulu.
Kuthiwa abantwana zezona zichanekileyo ukujonga abantu. Abantwana bakulungele ukudlala naye nabani na onobubele. Ke ngoko u-Qin Yinyu ufikelela kwisigqibo sokuba u-Lu Xi wosapho lwakhe useyintombazana enobubele.
U-Qin Yinyu wazisa uLele esibhedlele ngokukhethekileyo ngeli xesha. Wayefuna uLele ancokole noLu Lu. Emva kwayo yonke loo nto, ngabantwana abakwiminyaka efanayo. Kuya kufuneka babe nezihloko ezininzi eziqhelekileyo abanokuthetha ngazo. Wayenethemba lokuba uLele onoyolo unokuba nefuthe kuLu Lu onovaka kwaye enze uLu Lu onwabe.
Ukufika kwakhe esibhedlele, uQin Yinyi wayezama nje ukucacisela umfo omncinci isizathu sokumzisa esibhedlele. Kwenzekile ukuba adibane nogqirha kaLu Lu Lu, ke wabuza imeko kaLu Lu. Ngubani owayenokulindela ukuba uLele angabaleka xa ephazanyiswa.
Ngethamsanqa, akazange abaleke aye kwezinye iindawo, kodwa weza apha kuLucy.
ULele noLu Xi bayathetha, kwaye uQin Yinjian akadingi kucenga uLele ukuba akhaphe umntakwabo. Ukholelwa ekubeni uLele angakhokela uLu Lu kakuhle.
U-Qin Yinjian uye wasunduza umnyango kwigumbi wabona ukuba u-xiaolele kunye no-Xiaolulu sele bethetha. Aba bantwana babini babembona njengesilo banokuthetha kakuhle.
Weva uLele esithi, “ungoyiki bhuti wam. Kudala ndigula, kodwa ukuba nje ndimamela ingcebiso zikagqirha, ndiza kuphila ndigoduke ndiyokutya ukutya endikufunayo. ” U-Lu Lu emva koko wathi: “Uneminyaka emithathu, kwaye nam ndineminyaka emithathu. Singontanga. Andinguye umntakwethu… ”
Umfo omncinci olele ebhedini yesibhedlele usenamandla okuphikisana naye malunga nokuba ngubani omkhulu kwaye mncinci. ULele ubeke izandla esifubeni wathi: “Udade wethu uthe ndineminyaka emithathu neenyanga ezisithoba ubudala, wena uneminyaka emithathu neenyanga ezintlanu, ndinenyanga ezine kunawe, ndingubhuti wam. ungumzalwana wam.
Umfo omncinci ophule yonke into ngequbuliso wathetha into esengqiqweni, eyamenza ngequbuliso akakwazi ukufumana ubungqina.
ULele uthe, “Lulu omncinci, ndicela undibize ngobhuti.”
U-Lu ebengafuni ukubiza inkwenkwana egama lingu bhuti, kodwa akalufumani ulwimi ukuphikisa uLele. Wayenokucela uncedo kuLu Xi kuphela: “Mama, andifuni ukuba ngumzalwana, ndifuna ukuba ngumzalwana.”
“U-Lu Lu, ubhuti kunye nobhuti bazimisele ngomyalelo wokuzalwa, hayi ukuba ngubani ofuna ukukwenza. Umncinci kwiinyanga ezine kunoLele. ULele ngubhuti wam. Ungumzalwana wam. ”U-Lu Xi uchukumise iintloko zala makhwenkwe mabini ngokwahlukeneyo watsho ngoncumo oluthambileyo.
Ilizwe labantwana lilula kwaye ligcwele ukonwaba, isihloko nje sokuba ngubani umkhuluwa kwaye ngubani umntakwabo omncinci angabenza ukuba baxabane ixesha elide, banokuthi omnye nomnye anyaniseke kumzalwana omkhulu, ngokungathi kunjalo Ndonwabile njengehlabathi liphela.
Kuba ubhuti wakhe kunye nomninawa wakhe beyaziwa kwasekuzalweni kwakhe, uLu Lu unqabile ukuvuma ukuba ungumninawa omncinci, kodwa ngenxa yemfundo yesiqhelo kamama wakhe, wakhwaza uLele ngesizotha, "bhuti Lele."
ULele, obesoloko engoyena mncinci kusapho olukhulu, ngoku unomfana omncinci kunaye. U-Lele wonwabile kangangokuba utsibe kabini ewadini: “bhuti Lu, ndifuna ukuva igama lakho mntakwethu.”
U-Lu Lu Dudu uthe, "Hayi."
Lele: “Ndizokuphathela izinto zokudlala ezininzi ozodlala ngazo ngomnye umnxeba.”
Lu Lu: "bhuti Lele."
Aba bafana babini bancokola bonwabile kunye, emva koko baqala ukuthetha, oh hayi, malunga neekhathuni zabo abazithandayo kunye neethoyi Ngelizwi, uLucy akanakuphazamisa. Usikhumbuza ngamanye amaxesha ukuba abafana abancinci abamthandi ngeengxaki zakhe.
ULu Xi ujonge uLu Lu kalusizi, ayitsho ukuba oyena mntu amthandayo nguMommy? Awufuni ukuba kunye noMama? Kutheni le nto umntwana owayesandula ukumazi ixesha elingaphantsi kwesiqingatha seyure engakhathaleli ukuba ngumama?
Kuthiwa unyana wakhe akanakunceda umama wakhe ukuba uneminyaka engaphezulu kontathu.
Intuthuzelo! Cela ukuhoya!
Kodwa ukongeza owakhe umganyana, ngubani onokumnika ukumbambisa.
Njengokuba uLu Xi wayecinga kalusizi, uQin Yinjian ngequbuliso wahlala ecaleni kwakhe wathi endlebeni yakhe, “uyazi ukuba kunjani ukungahoywa?”
ULuhinunu uthe, "yintoni ingxaki yakho?"
UQin Yinjian akazange afune ukuxabana naye, ke watshintsha isihloko wathi, "bayathetha ngemicimbi yabo, ke nathi sithetha ngemicimbi yethu."
“Phakathi kwethu?” U-Lu Xi wothukile, emva koko wongeze wathi, "Ndizakuzama ukubuyisa imali endikutyala yona."
Ubuso bukaQin Yinjian batshintsha ngesiquphe: “…”
Lo mfazi usematyaleni. Ngaba uyafuna ukuthetha naye ngemali?
Wayengazi. Wayenqongophele kuyo yonke into okanye imali.
Lu Xi: “awuthethi, unomsindo kwakhona?”
U-Lu Xi wongeze wathi: “uhlala unje. Ukuba unomsindo awuthethi. Uyazi ukuba lo mntu ufuna ukubethwa nyhani? ”
UQin Yinjian: “emva koko awuyazi ukuba uyandicaphukisa?”
U-Lu Xi wathetha ngendlela engeyiyo, “Ndiqaphele ukuba andikucaphukisi, kodwa ucaphuka msinya. Ngamanye amaxesha andizazi apho ndikucaphukise khona, ukuze ungandihoyi. Yintoni enye ocinga ukuba kufuneka ndiyiqwalasele? "
Ukuva amazwi kaLu Xi, uQin Yinjian waqonda ukuba unengxaki enje, kodwa akakwazanga ukubeka phantsi ubuso bakhe athi, "ngokokubona kwam, awulilo ibhinqa elingenangqondo."
Lu Xi: “mhlawumbi kungenxa yokuba nomntwana. Kuthiwa uneminyaka emithathu ekhulelwe. ”
Uzixelele amatyeli angenakubalwa ukuba angamkhathaleli ngobomi bakhe bangaphambili nokuba ngubani na onokuba nabantwana. Kodwa ngalo lonke ixesha ekhankanya esi sihloko, ikhwele lakhe langaphakathi lihlala liphuma ngaphandle kokuzenzela, into emenza angakwazi ukuzibambisa.
Unakekelo lokuba umntwana ebhedini ayisiyakhe.
Kodwa nokuba ukhathalele, usasebenza nzima ukwamkela umntwana
U-Lu Xi uphinde waziva iingcinga zikaQin Yinjian kwaye wancuma kabuhlungu: “enkosi ngokuvumela uXiao Lele ukuba akhaphe uLu Lu Lu.”
U-Qin Yin uzame ukubekela ecaleni izimvo ebekungafanelekanga ukuba zibekho engqondweni yakhe kwaye azenze abonakale ekhululekile: “U-Lele ulingana nobudala obufana no-Lu Lu Lu. Kuya kubakho izihloko ezininzi ekunokuthethwa ngazo. Ndihlala ndivumela uLele akhaphe uLu Lu Lu kwixesha elizayo. ”
“Ayilunganga kakhulu,” wema. Zininzi kakhulu iintsholongwane esibhedlele. Akukho mntu ungenasifo okanye zintlungu uzimisele ukuza apha. Myeke uLele ngumntwana omncinci kangaka. Akufanele uze naye esibhedlele kwixa elizayo. "
UQin Yinjian: "Ndinoluvo lwakho?"
Lusi: akufunekanga ubuze olwam uluvo
UQin Yin: "Ndinezwi lokugqibela kulo mbandela."
Lu Xi: "kutheni?"
UQin Yinjian uphakame wathi, “uLele uzakuhlala apha. Ndizakumlanda emva kwemini. ”
Lu Xi: "ndingayenza phi?"
Nangona kunjalo, uQin Yinjian akazange ahambe engakhange athethe nelizwi. Ubeke abantu apha, kwaye uLu Xi angayenza, okanye hayi.
Uthe akubona uQin Yinjian engekho, uLele wabaleka waya kwicala likaLu Xi wathi ngokucacileyo, “dade Lu Xi, kufanele uhlale kude nomalume wakho kwixesha elizayo, kungenjalo uza kukutya.”
Utsho u-Lu Xi encumile, “uLele woyika umalume wakhe? Ngoba? "
ULele uthe: “Umalume wam uhlala enobuso obuthe tye. Akaze ancume uLele. ULele woyika ukuba uzakumtya uLele, yiyo loo nto uLele esoyika. ”
Lu Xi: kunjalo
Njengoko kulindelwe, abantu abangakwaziyo ukuhleka bayacaphukisa!
Emva kokuba uLele eyisiwe ekhaya, wangqingwa ngabafazi abathathu kusapho lwakhe.
Abafazi abathathu bakhulu bajikeleze eli qela lincinci kwaye bajonge kuye njengebanjwa letyala. U-Qin Yueran, njengommeli, uthe, "u-Yuele uyathobela. Khawusixelele ngayo. Uthathwe ngubani umalume wakho namhlanje? ”
“Makhulu, makazi, mama uvuyo unxaniwe! ”ULele uthe akanamazwi kubo bobathathu. Wayefuna ukwazi ukuba umalume wakhe umthathe wayombona ngubani. Kwakungangcono ukumbuza ngqo. Kutheni le nto bathathu bamrhuqela egumbini lakhe bamnyanzela ukuba abuze?
Nokuba bobathathu bafuna ukwazi ngaye, ngaba ungabacela ukuba bamnike iglasi yokuqala yamanzi?
Ngaphandle koko, angabaxelela njani? UQin Xiaobao ukhawuleze wanika uLele iglasi yamanzi wamncamathelisa igxalaba umfo omncinci. Utsho ngentetho emcengayo: “Mhlekazi mncinci, nanko esiza amanzi. Sela ngokukhawuleza. Thetha ngokukhawuleza. ”
U-Lele uthathe iglass yamanzi kunye no Gulu Gulu Gulu basela. Emva kokusela, wafuna ukuya kwindlu yangasese kwakhona: “Mama, kufuneka ndichame.”
“Nyana ndini, kutheni uxakeke kangaka?” Nangona zininzi izinto zokungamthandi lo mfo mncinci, uQin leran umsa kwigumbi lokuhlambela kwaye umcela ukuba achame. UQin leran umbuyisa ngokuthe ngqo. "Lele, sixelele ukuba ubona bani namhlanje."
U-Lele uyazi ukuba ulilungu elibalulekileyo losapho. Nanini na xa ebonakala, uya kugxila ekuqwalaseleni usapho. Nangona kunjalo, aba bantu banikela ingqalelo kakhulu kuye namhlanje, kungengenxa yakhe, kodwa ngenxa yabantu ahlangane nabo.
Ucinga ukuba umntu ukhathalelwe ngumakhulu, umakazi nomama kunaye, uLele akonwabanga: “makhulu, anti, mama, awumthandi uLele?”
“Lele, ungoyena mntwana uthandekayo kusapho lwethu. Singathini ukuba singakuthandi? ” uthe
UQin Xiaobao ujonge ngqo kuLele entloko: "mfana, ungandixelela ukuba zininzi kangakanani izinto."
UQin leran uphakamise intloko kaLele ngaphandle kokubonisa ubuthathaka: “Lele, ucinga ntoni kwintloko yakho encinci imini yonke? Sonke sikuthanda kakhulu, singathini ukuba singakuthandi? "
Usapho luyamthanda, kwaye uLeLe ucacile entliziyweni yakhe. Akonwabanga ukuba kugxilwe ngumntu wonke namhlanje kubantu aya kubona endaweni yakhe. Ayisiye kuphela umalume wakhe othanda udadewabo uLu Xi ngcono, kodwa nabadala abamthandayo ekhaya banomdla ngakumbi ngosisi Lu Xi. ULele akonwabanga.
“Ndibuya kwisikolo sabantwana abancinane, ukhathalele into endiyityileyo nendiyidlalayo namhlanje, kodwa khange ubuze ukuba bendiphume ndiyokudlala namhlanje, buza nje umalume wam ebendise. Andonwabanga. ”
Kuvela ukuba lo mfo mncinci unomona.
Uye wathi, “kulungile, asibuze ukuba uLele udibene nabani. Sibuza ukuba uyephi uLele namhlanje kwaye sitya nabani isidlo sasemini. ”
UQin Xiaobao uthe: "ewe, sonke sifuna ukwazi ukuba uLele wenze ntoni ngosuku."
UQin leran naye uvumile: "Ndicinga ukuba uLele kufuneka onwabe namhlanje."
Kuthiwa abafazi abathathu badlala umdlalo, ndingasathethi ke ngabafazi abathathu bosapho lakwaQin. Ngokwenene ngumbhali odlalayo. ULele omncinci angamelana njani nobathathu? Xa beqhayisa ngayo, ngokukhawuleza bayakulibala ukungonwabi kwabo.
ULele wathetha nzulu: “umalume wandishiya esibhedlele, kwaye ngusisi uLucy endiphekele emini…”
UQin leran uqale wawabamba amagama aphambili: “Lele, uthetha ngosisi Lu Xi? Uqinisekile ukuba awukhange uthethe igama elingalunganga? "
ULele Dudu umlomo omncinci: “Mama, uLele akasosidenge, ndingamkhumbula njani udade uLu Xi ngokungalunganga. Usisi Lu Xi mhle kakhulu kwaye unobubele kum. Unyana kadade Lu Xi naye uyathandeka. Ukwabiza ubhuti uLele Makhulu, ndikwangubhuti. "
Amava anamhlanje noLucie noLucie bonwabile kakhulu, ke xa uLele ethetha ngomama nonyana wabo, bonke babonakala bonwabile.
"ULele ubonakala emthanda kakhulu udade uLucy," utshilo uJane
ULele wanqwala: “Amaphiko enkuku kaCoke ka-Coke amnandi. ULele uyakuthanda ukuzitya. ”
“Dadewethu, buza le ngongoma.” UQin Xiaobao ngunyana onamandla. Ababuzi, “uLele, usisi Lu Xi unonyana. Ngaba igama lakhe nguLu Lu lichanekile? ”
ULele wanqwala: “Igama lakhe nguLu Lu Uyathandeka njengoLele, kodwa akabaleki njengoLele kuba uyagula. Makazi, ukuba uyagula, kufuneka utofiwe kwaye uthathe amayeza. Kubuhlungu kakhulu. ULele akasoze aphinde agule. "
“Ukuba uLele akafuni kugula, kufuneka akuthande ukucoceka kwaye angakhethi kutya. Ingaba uyazi?" UJane akasazi isifo sikaLu Lu. Ucinga ukuba kunjengabantwana abaninzi abanengqele, umkhuhlane okanye iingxaki zesisu. Akasihoyi kakhulu isifo sikaLu.
ULele uthe: “ewe.” “Intle kangakanani!” UJian ubalekile kwaye uQin lelan bonwabile kakhulu kukuvumela uQin Yinjian athathe uLele ahambe naye. Bafuna nje ukuba uLele acele ulwazi. Ngoku zibuya iindaba. Kuyafana nomxholo we-Intanethi. Umlingane kaMongameli omtsha kaShengtian akatshatanga kwaye unosana kuqala. Umahluko kukuba i-Biology ye-Intanethi uLu Xi ngumfazi okhohlakeleyo
. Oko uLele akubonayo ngumfazi onobubele kwaye mhle. Abantwana abancinci abayiqondi. Baxhomekeke kuphela kwi-intuition kunye nokukhetha kwabo. Ke uJane ukholelwa ukuba intombazana egama linguLu Xi kufuneka ibe yintombazana enobubele. Logama nje enentliziyo entle kwaye u-Qin Yin eyithanda, ibaluleke ngantoni into ayenzileyo ngaphambili? Logama nje ezimisele ukungena emnyango wosapho lweQin,
ucango losapho lwakwaQi luhlala luvulelekile kuye.
UJane ubeke uLele phantsi wachukumisa intloko yakhe: “Kunzima namhlanje kusana lwethu. Hamba uye kuhlamba izandla ulungiselele isidlo sangokuhlwa. ”
Ekugqibeleni, singatya isidlo sangokuhlwa. ” Isisu sika Lele siphantse sathi tyaba. Ngoku xa esiva ukuba angatya, ujike abaleke ayohlamba izandla.
I-Qin Xiaobao akukho lula kangako ukuthetha ngayo. Ebesoloko eyinkosi esoyika isiphithiphithi emhlabeni: “Ndithe dade boMolokazana, ungayenza lonto?”
“Yintoni enye oyifunayo?” Uthe uQin Xiaobao uthe: “ULele unolwazi oluncinci kakhulu. Lo mfazi khange akwazi ukungena kusapho lweQin okwangoku. Kumele ukuba uzenza umntu olungileyo kwaye uzama ukukholisa ubutyebi bentsapho yethu yaseQin. Mhlawumbi xa sele etshatile nosapho lweQin, uyakubonisa uburharha bakhe. Usibali wam, ngokoluvo lwam, lo mba ufuna ukuba ndiphume ndiyokufumanisa ukuba uyazenzisa okanye hayi. "
“Qin Xiaobao, ungangxoli nam.” UJane uphakamise ilizwi kancinci. “Ngokwenene ucinga ukuba indoda yosapho lwakho lweQin ibubutyebi. Wonke umntu ufuna ukungena entloko kwaye atshate? ”
UQin Xiaobao: “andithi?”
"Ndiza kukuxelela, ukuba bekungekho ngenxa yomsindo wethu, akukho mntu unokumelana nesibindi esibuhlungu esingazange sithethe ukuba wayenomsindo amashumi eminyaka."
UQin Xiaobao: "umntakwethu uyadika, kodwa ulunge kakhulu kuwe." “Uyabona kuphela xa elungile kum, awumboni xa embi kum, phezolo ebenomsindo ngam kwaye andandihoya.” Xa kuziwa kwiQin Yue, uJane unothando kwaye unenzondo. “Andazi ukuba kunjani. Intsapho yethu yayithandeka kwaye isengqiqweni xa yayisengabantwana. Ndandicinga ukuba uzuze njengelifa imizila yemfuza. Ngubani owaziyo ukuba okukhona bebankulu, kokukhona befana notata wabo, kokukhona benomsindo ngakumbi utata wabo kunye nonyana wabo. "
UQin Xiaobao: “Kulungile, ndiyavuma kukusilela kwabo, kodwa bobabini bahle kwaye bayigolide. Yindoda yokuqala neyesibini efunwa kakhulu emhlabeni. "
UQin Xiaobao uthetha inyani, kodwa akananto anokuphikisana nayo: “kulungile, niyaphila. Kodwa ndinoluvo lwam malunga nomcimbi kaLucy. Awuvumelekanga ukuba uze apha, okanye ndiza kukuvumela ukuba uhlale emkhosini iintsuku ezimbalwa. "
UQin Xiaobao wakhala ngomsindo: “dade womthetho, uyandoyikisa! Uyandoyikisa! Ngaba usengumolokazana wam onobubele nomhle? "
“Nditshatele kowenu uQin,” watsho ngoncumo. Ngoku ndizinze endaweni kaNkosikazi Qin, ndingabonisa uburharha bam. ”
UQin Xiaobao: “…” Ngeli xesha, wangcwatyelwa emngxunyeni awagrumba.
Usapho luthe tyaba ngakumbi kunolo ngalunye, olwenza uQin Xiaobao aqonde ukuba isikhundla sakhe kusapho siye sehla sisezantsi. Wayeyazi ukuba akazukulwa emfazweni ukusuka esiphelweni ukuya emkhosini. Ngoku akafumani mntu wokumngcungcuthekisa. Intliziyo yakhe ivaliwe!
Wayengakhululekanga kwaye engamvumeli ukuba amxhaphaze uZhan Nianbei ekupheleni kwemfazwe. Ngoku nguZhan Nianbei kuphela. Emva kokugoduka, uQin Xiaobao wahlala kwigumbi lokuhlala walinda uZhan Nianbei ukuba agoduke. Ekugqibeleni, xa uZhan Nianbei egodukile, wajonga phezulu wathi, “Zhan Nianbei, lityala lakho lonke!”
UZhan Nianbei ubhidekile: “ndenze ntoni ukukucaphukisa?”
UQin Xiaobao: "ndibuyisele unyana wam."
UZhan Nianbei: "Ukuphela kwemfazwe?"
UQin Xiaobao: "ngaphandle kwakhe, ndinabo abanye oonyana?"
UZhan Nianbei: "Ekuqaleni, ndikucebisile ukuba uzimisele ukumthumela emkhosini. Ngubani obekek 'ityala? ”
UQin Xiaobao: “kutheni ungandinqandi?”
Ukwazi ukuba lo mfazi ulungile, uZhan Nianbei akafuni kujongana naye, ajike aye kwigumbi lokulala.
U-Qin Xiaobao waxhuma walandela: “Zhan Nianbei, uthetha ukuthini xa ungathethi?”
UZhan Nianbei: "UQin Xiaobao, sukujonga ingxaki."
UQin Xiaobao wabeka izandla zakhe esinqeni wathi ngomsindo: “Zhan Nianbei, yintoni engenziwanga? Nonke niyandixhaphaza, andithi? Ngoku ndifuna ukubona unyana wam. Akuvumelani. Yintoni enye endingalindela ukuba undenzele yona? "
UZhan Nianbei ukhulule iimpahla zakhe nganye nganye phambi kwakhe, waya kwigumbi lokuhlambela ze ze ejonge uQin Xiaobao. U-Qin Xiaobao ebengenakunceda ngokuginya amathe: "umgqakhwe omdala!"
Shit, esazi ukuba akanakulwa, uthengisa umbala womzimba wakhe. Akazi ukuba umzimba wakhe ogcinwe kakuhle, osele unamashumi eminyaka ubudala, awunakuxhathisa.
UZhan Nianbei uthe, "hlambani kunye?"
UQin Xiaobao uthathe iimpahla zakhe wazaphula: “Hlamba intloko yakho enkulu! Ndiza kukuxelela ukuba awuyi kundivumela ndibone unyana wam. Awuvumelekanga ukuba ubuyele kwigumbi ngokuhlwanje. Awuvumelekanga ukuba ulale nam. Awuvumelekanga ukuba ube kufutshane nam amanyathelo amathathu. Awuvumelekanga u…
UZhan Nianbei: “ha…”
UQin Xiaobao: "Uthetha ukuthini ngokuthimla?"
UZhan Nianbei: "Ngaba uyazi ukuba kuthetha ukuthini?"
UQin Xiaobao: “…”
Le rascal yakudala!
UQin Xiaobao wayizolisa intliziyo yakhe wathi, “ngomso, ungamlungiselela ukuba eze ekhaya andikhaphe usuku.”
UZhan Nianbei akaphenduli, kodwa uQin Xiaobao uyazi ukuba akazokwala. Ngoku ufuna ukucinga ngendlela acoca ngayo umlo ngomso kwaye abe nomsindo ngala mntwana unukayo ekugqibeleni.
Ngokulula, bendisemkhosini iiveki ezininzi.
Ukusuka kumlo wokuqala wokuphela kwemfazwe ukuza kuthi ga ngoku, ngokuthe ngcembe uhlengahlengise ubungakanani boqeqesho lomkhosi.
Namhlanje, njengakwixesha elidlulileyo, wayebuyela kwigumbi lakhe lokulala emva kwesidlo sasemini. Ngokukhawuleza njengoko wayeya kwigumbi eliphezulu, weva igama lakhe kunomathotholo wamcela ukuba aye eofisini kaputeni yedwa.
UZhan Nianbei uphakamise umoya wamanqaku angama-200, wabaleka waya kwi-ofisi kaputeni ngesantya esikhawulezileyo wankqonkqoza emnyango: “xela!”
“Ngena,” kwavakala ilizwi egumbini
UZhan wemkile esiphelweni sokubaleka, kodwa emva kokungena endlwini, wafumanisa ukuba yayingenguye umphathi wakhe owabizayo, kodwa nguyise. Ubuso bakhe behla ngequbuliso, wajika wemka.
UZhan Nianbei wambiza, "ubalekela phi?"
Ekupheleni kwemfazwe, andifuni kujongana noWang Badan wakudala. Kungcono ndihambe ngendlela yam.
UZhan Nianbei: "9987!"
I-9987 linani lomkhosi ekupheleni kwemfazwe, igama elibizwa ngalo igama lokuphakama komntu ongaphantsi kweliqatha. Ebona ukuba akabakhathaleli abanye, uWang Badan mdala ukhupha isazisi senkokeli ukuze imcinezele.
Nangona bekukho abantu abaliwaka ababemathidala ukulwa, bayeka ukuphela kwemfazwe kwaye ngoko nangoko bazimisela: "Inkokeli elungileyo!"
Nangona uZhan Nianbei efumana iindaba zoqeqesho malunga noZhan Li yonke imihla kwaye eyazi yonke intshukumo yakhe, usamangalisiwe kukuba le nkwenkwe ivila ingenza ngolu hlobo ngexesha nje elifutshane.
Wayengafane athi ngethoni katata, “kulungile, akukho mntu wangaphandle apha. Akunyanzelekanga ukuba uhambe nenkosi yam. ”
Ekupheleni kwemfazwe, wema nkqo: "lo gama nje esemkhosini usuku olunye, kuphela ubudlelwane phakathi kongaphezulu nongaphantsi."
Ikona yomlomo kaZhan Nianbei yathatha umsi yathi, “namhlanje, ndiza kukunika usuku lokuphumla ndigoduke ndikhaphe abazali bakho.”
Imfazwe isusela esiphelweni: “xela inkosi, abazali bam baxhonyiwe, akukho mfuneko yokuba ndibuyele emva ukuze ndibakhaphe ngeholide.”
UZhan Nianbei uthathe umoya obandayo wazama ukucinezela umsindo wakhe, kodwa akazange: “Ekupheleni kwemfazwe, uyafuna ukubethwa? Ukuba usafuna ukubethwa, andinangxaki nokukhathalela wena kwakhona. "
Ekupheleni kwemfazwe: “intloko yengxelo, ungoyena mkhulu kwingingqi yomkhosi waseJiangbei. Uthe ndifuna ukucoceka, kodwa akukho mfuneko yokuba uyenze. Ngokwendalo umntu othile uya kundicoca ngenxa yakho Njengeentsuku endandisemkhosini ngazo. Yiza, wenze nantoni na oyifunayo. "
UZhan Nianbei uyazi ukuba uyayishiya imfazwe ukuya kupasa kokugqibela kwaye ahambe aye kuloo ndawo, kodwa uxelela nabantu bakhe ukuba bangamniki ubuso. Kuninzi kakhulu ukuthatha amandla enkwenkwe kakuhle. Okwangoku, akazanga azokufumana le nkwenkwe ngokwakhe. Inkwenkwe kufuneka imnike ubuso endaweni yokuba: "Umama wakho ukukhumbule."
Ekupheleni kwemfazwe: “xela inkosi, andina mama. Ndaphuma kwelitye. "UZhan Nianbei:"
Ekupheleni kwemfazwe: “igosa eliyintloko, ukuba awunayo enye into, ndifuna ukuhla ndiphumle kuqala. Ukuba awuphumli kakuhle emini, inokuchaphazela uqeqesho lwakho emva kwemini, nceda uphakamise isandla. "
UZhan Nianbei: "Kulungile, hamba uyokwenza umsebenzi wakho."
“Enkosi, nkosi. Ndizokuhla kuqala. ” Ekupheleni kuka-Zhan Li, wenza umbuliso oqhelekileyo ku-Zhan Nian, wajika washiya ngamanqanaba asemgangathweni. Nangona kunjalo, ukuphuma kwakhe, wamiswa ngamajoni aliqela, "ufuna ukwenza ntoni?"
Abantu abaliqela abathethanga lizwi, ibutho liya kurhangqa ukuphela kwemfazwe kwaye limphakamise kunye
Emva kwakhe, uZhan Niang uthe, "Andikholelwa ukuba andinakukucoca kummandla wezomkhosi waseJiangbei."
Imfazwe ishiye ikhaya.
Nangona kunjalo, akazange ahambe ekhaya ngokuzithandela, kodwa wathwalwa ekhaya ngabantu abaliqela.
Wayenomsindo kangangokuba wayefuna ukuqhushumisa indlu.
Kuyinyani ukuba akazange ambone umzali onje oko emdala kangaka. Kubonakala ngathi akangonyana wabo, kodwa yinto yabo yokudlala. Ekupheleni kukaZhan Li, wayenomsindo kangangokuba wayefuna ukuqhushumba usapho. Nangona kunjalo, uQin Xiaobao, omnye wabenzi bobubi, khange abonakale ngathi uyaqonda ukuba uhambe kangakanani. Wamkela ngovuyo unyana wakhe owayengamboni iintsuku ezininzi egoduka: “nyana, ukuze ndikwamkele kwakhona, ndiye ndapheka itafile emnandi. Wonwabile? Ngaba ushukunyisiwe? "
Ndifuna ukulila ukuphela kwemfazwe.
Isakhono sikanina sokupheka siyamangalisa. Akazi kwaye umphekele ngokwakhe. Kubonakala ngathi umama wakhe akazange amenze abone impazamo yakhe, kodwa wayefuna ukumbulala ngenye indlela.
UQin Xiaobao weza emehlweni akhe wathi ngoncumo, “mfana, ingaba uziva ushukunyisiwe kangangokuba awukwazi nokuthetha?” Ekupheleni kwemfazwe: “Nkskz. Zhan, unayo ityhefu yeempuku ekhaya? ”
UQin Xiaobao: "Uthetha ukuthini, mfana?"
Ekupheleni kwemfazwe: “Nkskz. Zhan, ndicela undinike ibhotile yeyeza lempuku. ”
Ngokwenyani, kungcono ukutya ukutya okumnyama okwenziwe ngunina kunokuba uthathe iyeza lempuku ngokuthe ngqo.
UQin Xiaobao: “hayi ekhaya. Ufuna ndicele indoda endala uZhan ukuba ikuthengele kanye. ”
Ekupheleni kwemfazwe: “Kulungile, khawuleza uyithenge. Ndiza kulinda. Nangona kunjalo, ubomi bam busebenze ngengozi nobabini. Ngoku nina nobabini buyelani emva kwakhona. Andisayi kuphinda ndiphathwe gadalala nobabini kulomhlaba futhi. "
UQin Xiaobao wancuma: “nyana, ungayenzi loo nto. Ndiyazi ukuba umama wakho akalunganga. Ndicela ubuye uzoxolisa. Ukuba unenani elikhulu labantu abadala, ungakhathazeki ngam njengomfazi. "
UZhan ukhawuleze wabuyela umva esiphelweni semfazwe, wavula umgama noQin Xiaobao, wajonga ngomsindo wakhe: “Zhan ma, ufuna ndenze ntoni?”
Wayeboshwe ngokufanelekileyo emkhosini wacela uxolo kuye. Kwakungathi ilanga liphuma eNtshona. Kwakungathi liphupha.
UQin Xiaobao uthe, “Ndiyakukhumbula nje, ke ndiza kukuvumela ukuba ugoduke uyokutya isidlo sangokuhlwa kwaye ubone ukuba unazo na iimfuno emkhosini. Ndiza kuvumela uZhan omdala ukuba akulungiselele. ”
Ekupheleni kwemfazwe: "hum…"
Ukuba uyamkholelwa, akazukubiza uZhan limo, kwaye zonke ezi mpazamo ziya kuchitha.
UQin Xiaobao: “nyana, sukumkhusela umama wakho kumasela. Yiza uhlale phantsi uthethe kamnandi nosapho lwam. "
Ekupheleni kwemfazwe: “Mama, ukuba unento ofuna ukuyithetha, ungoyikisi unyana wakho ngoluhlobo. Ukuba woyikisa unyana wakho kububhanxa, unyana wakho akazukufumana mfazi kwixa elizayo, kwaye umzukulwana wakho akazukuwola. "
UQin Xiaobao: “inene, ndiyakukhumbula, ndifuna ugoduka uyokutya isidlo sangokuhlwa nosapho lwam. Awazi ukuba umama wakho wayelusizi kangakanani xa wawungekho. Wonke umntu angangcungcuthekisa, kodwa andifumani mntu onokundingcungcuthekisa. "
Wayesitsho ke umama wakhe engemhle kangako. Wayemkhumbula kuba kwakungekho mntu umxhaphazayo.
Eyona njongo yakhe kule ntsapho kukuvumela ukuba axhaphaze abanye.
UZhan Li wancwina ekugqibeleni: “UQin Xiaobao, ndizalwe ngo-Okthobha. Awundikhathalelanga. Kuya kufuneka ucinge ngomsebenzi wakho onzima ngo-Okthobha. ”
UQin Xiaobao wathi ngoncumo: “Ndiyicinge nje lento, ke ndiceba ukukuphatha kakuhle ukusukela ngoku. Ndixelele, yintoni engekho emkhosini? Nantoni na oyifunayo, ndiza kuvumela indoda endala uZhan ukuba ikulungiselele, ukuze uphile kamnandi emkhosini kunasekhaya. "
UZhan Nianbei: "Ngaba ucinga ukuba ndineminyaka emithathu ubudala?"
Xa wayeneminyaka emithathu ubudala, akazange ayiphose into ethethwa ngumama, myeke ngoku.
UQin Xiaobao: "ungalinga ukuthi ndiyathembisa ukuba soze ndophule isithembiso sam." Kuba umama wakhe efudumele kakhulu, akanakuwonakalisa ngokulula umdla wakhe. Ekupheleni kwemfazwe, wayehleli esofeni kwaye esonge imilenze yakhe: “Ndinesidlo esimnandi emkhosini, ndinokuyenza ngendawo yokuhlala, kwaye ndiyabazi abahlobo abambalwa abanokuncokola nam. Ngoku ndiswele intombi.
UQin Xiaobao: “wena mfana!”
Ekupheleni kwemfazwe: "ukuba andikwazi, anditsho."
Ekuqaleni, wayethetha nje ngokungakhathali, kwaye akazange awathathe nzulu amazwi kanina.
Amehlo kaQin Xiaobao ajikile: "mfana, akukho majoni ababhinqileyo emkhosini?" “Ewe ndiyakwenza, kodwa ndomelele njengendoda. Ndingaba namathambo xa ndilele. Andinamdla kuyo. ” Xa kuziwa kumajoni amabhinqa emkhosini, ndisenoluvo olunzulu lwentombazana ukusukela esiphelweni semfazwe, kuba wayephulukene naye kuqeqesho lokuqala lomlo emkhosini, waphosa ubuso bakhe kuyo yonke indawo.
Cinga ngokothusayo njengomfazi webhere, imfazwe ephuma esiphelweni senzondo yamazinyo, ukuba kungekudala uza kufumana ithuba lokumenza avele ukuba nengqumbo.
"Akukho nto igwenxa ngokuba womelele," watsho uQin. "Mhlawumbi kwixesha elizayo, ndiza kukunika ukuzalwa okumbalwa, ukuze ukonwabele ukuba ngutata amatyeli aliqela ngexesha." “Musa…” Ekupheleni kwemfazwe, waphakama wathi, “Uyabona ke ukuba ndiyibonile. Ukuba ayikho enye into, ndiza kubuyela emkhosini kuqala. Umkhosi uphantsi kolawulo olungqongqo. Awungekhe ugoduke ngokuthanda. Awungekhe ube neenkani kwixa elizayo. Nangona umyeni wakho enobuso nobuso emkhosini, sukumnika nto umntu wakho,
menze nzima ukuba yindoda. "
UQin Xiaobao watsho ngoncumo, “ukhulile. Uyazi ukuba undikhathalele. ”
Ekupheleni kuka-Zhan Li, wancwina: “U-Laozi wam utshate umfazi ongagugiyo ebomini bakhe. Ukuba unyana wam akalalanga mdala, uyakudinwa kakhulu. ”
UQin Xiaobao: "yima umzuzu, ndinenye into endikubuza yona."
Ekupheleni kwemfazwe: "yintoni ingxaki?"
UQin Xiaobao: "uyayazi intombazana egama linguLu Xi kwinkampani kaXiaojian?"
Ekupheleni kwemfazwe: "Inenekazi elihle uLu."
Amehlo kaQin Xiaobao aqaqambile: "uyayazi lonto?"
Ekupheleni kwemfazwe: “mna naye asazani nje kuphela, kodwa sinobudlelwane obuhle. Ukuba ubungandiphosanga emkhosini ngeli xesha, ngesele ndimbambile
Inyani yile yokuba, ngenxa kaLu Xi, waxhokonxa ubumnyama bukaQin Yinjian, wayeza kuba lusizi kangangokuba aphoswe emkhosini ukuze asokole. Kodwa zonke ezi ziziganeko ezidlulileyo. Ngapha koko, ngeli xesha lexesha, wayengenalo ithuba lokucaphukisa uLu Xi okanye uQin Yinjian kwakhona.
Amehlo kaQin Xiaobao avuleke: “uthini, nyana? Kutheni enolwalamano nawe? "
Ekupheleni kwemfazwe, wayeyinkosi eyayisoyika isiphithiphithi emhlabeni. Kuba wayephila kabuhlungu ngolu hlobo, abanye abantu akufuneki bacinge ngobumnandi besithi: “Mama, ndizokunyaniseka kuwe. Ndiyamthanda uLucy. Kufuneka ndimtshate ubomi bam bonke. "
UQin Xiaobao: “hayi, ungumfazi uXiaojian uyamthanda. Awungekhe uzonwabise. ”
Ekupheleni kwemfazwe: "okoko u-Qin Yinjian engatshatanga nekhaya lakhe, ndinethuba."
UQin Xiaobao: “Ekupheleni kwemfazwe, unamantombazana amaninzi. Ukuba utshata nabani na ayingomtshato. ”. Kutheni kufuneka uhambe ukhuthuza umfazi? Isimo sakhe siyabanda njengoyise, kwaye ngesiqhelo akanakufumana amantombazana amaninzi. Myeke yedwa. "
Jonga umama wakhe. Nditsho nentombi yakhe ifuna ukuba ayazise abantu. Ngethamsanqa, wayengafuni nyhani ukutshata noLucy, okanye wayeza kucaphukiswa ngunina.
Ngaphambi kokuphela kwemfazwe, uQin Xiaobao wathi, “mfana, kungcono ubuyele emkhosini. Musa ukuphuma kwixesha elizayo. "
Ukuze unqande izinto ezimbi ukuba zenzeke, uQin Xiaobao wagqiba kwelokuba amyeke uZhan Li ukuba aqhubeke nomkhosi ekupheleni kwemfazwe. Phambi kokuba uQin Yinjian atshate, akufuneki ukuba akhutshelwe ngaphandle ukuba enze ingxaki.
Imfazwe ukusuka esiphelweni: "Mama, sala kakuhle!"
Umama wakhe unomsindo ngakuye. Emva koko, nokuba angafa emkhosini, akazange afune ukumbona.
UQin Xiaobao kunqabile ukuba ayithathe ngokungathí sina: “nyana, baninzi abantu basetyhini emhlabeni. Akufanele ulibale ukuthanda umfazi ofanayo noXiao Jian. Ningabazalwana abalungileyo abakhule kunye. Abazalwana mabahlalisane kakuhle, uyazi? ”
Imfazwe kude kube sekupheleni: "usale kakuhle!"
Emva koko watyhalela ucango.
Ilungile lonto. Ndade ndayifumana into yokumisa umamakhe. Akufanele abenalo ixesha lokuza kwingxaki yakhe kwezi ntsuku.
Kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo, uQin khange avele esibhedlele.
U-Qin Yinjian khange avele, kodwa isibhedlele khange siyityeshele inkathalo ka-Lu Lu, ngakumbi u-xiaolele wayethunyelwa esibhedlele ngexesha yonke imihla ukuba akhaphe u-Lu Lu.
ULele ngumfana omncinci ongakhaliyo okanye ongxolayo. Unomonde futhi ukuncokola noLu Lu. U-Lu Xi uyachukumiseka, kodwa akanakusoloko evumela umntwana abaleke aye esibhedlele. Ngexesha lesidlo sasemini, uLu Xi uthetha noLele: “Lele, akunyanzelekanga ukuba uze esibhedlele uzokukhapha uLu Lu Lu ngomso.”
ULele usela isidudu asithandayo. Ngequbuliso uyeva ukuba uLucy umcelile ukuba angayisebenzisi esibhedlele ngomso. Umfo omncinci ufinge iintshiya athi phantsi, “dade, wenze ntoni uLele ukuze ungonwabi?”
U-Lu Xi uthathe itawuli yephepha wosula isidudu emlonyeni: "U-Lele mhle kwaye unengqondo, angamenza njani udadewabo angonwabi?". Esi sisibhedlele. ULele ubalekela esibhedlele yonke imihla. Kwimeko yosulelo lwentsholongwane kunye neebhaktiriya, kuya kwenzakala ukuba uyagula. Umama notata wakho bazakukhathazeka. "
"Kodwa ndiyathanda ukudlala nodadewethu nomntakwabo Lu Lu," utshilo uLele
Ngapha koko, uLele uzimisele ukubalekela esibhedlele yonke imihla, kungekuphela nje kuba ethanda uLu Xi kunye noLu Lu, kodwa kwanokuba uphathiswe uxanduva ngumakhulu wakhe kunye nonina. Bayeka bamkhathalele kakuhle umakhulu wabo ozayo.
Nangona uLele wayengakuqondi ncam ukuba uthini umakhulu kunye nomama wakhe malunga nomakazi olandelayo, wavuma ngovuyo. Ngubani omenze indoda yesixhenxe kusapho. Njengendoda kusapho, kuyimvelo ukukhathalela amanenekazi kusapho.
U-Lu Xi watsho ngoncumo, “nathi siyamthanda uLele, ke asifuni ukuba uLele agule. ULele uzakudlala into azakuyidlala ngomso, kulungile? ”
ULele wolule isandla sakhe esincinci ukuba achukumise intloko yakhe encinci kwaye wabeka imeko yokucinga enzulu kakhulu. Emva kokucinga, wanikina intloko kwakhona: “hayi! Kufuneka ndikhaphe umntakwabo Lu Lu Lu ukunyanga isigulo sakhe. Xa sele ebangcono kungekudala, singadlala kunye. "
Kutheni umntwana elukhuni kangaka emncinci kangaka?
Ngaba onke amadoda osapho lwawo lweQin anje?
Kuba ebengenakucenga uYuele, uLu Xi akenzanga, kodwa ebengenakuqikelela ukuba uQin Yinjian ucinga ntoni.
Kwezi ntsuku, khange aphinde abonakale, kucacile akafuni nokumbona. Ukuba awufuni ukumbona kwakhona, ungasusa lonke unxibelelwano naye, kodwa uvumele abantu bathumele uLele apha.
Ngokwenene yingqondo yendoda, sukuqikelela, uqashele ukuqikelela nayo ayiqondi.
Emva kwesidlo sasemini, u-Lu Xi ufumene umnxeba osuka kwigqwetha u-Yang: “Lu Xi, ndinemiyalezo emibini endifuna ukukuxelela yona. Yeyiphi ofuna ukuyiva kuqala, iindaba ezimnandi okanye iindaba ezimbi? "
"Mamela iindaba ezimnandi," watsho uLu
Iindaba ezimbi zimbi kangangokuba uLucy akafuni kuziva. Ukuba kufuneka umamele, nceda umamele kamva ukuvumela imeko elungileyo ihlale ixesha elide.
"Iindaba ezimnandi zezokuba umntu oziphethe kakubi ozenze utata kaLu Lu Lu ugwetywe, kwaye isigwebo asikho khaphukhaphu," utshilo uYang.
Kwezi ntsuku, uLu Xi uxakekile ekhathalela uLu Lu Lu. U-Lu Xi ukulibele oko. Ngoku igqwetha uYang liyikhankanyile, kwaye uLu Xi usandula ukunxibelelana nento: “igqwetha uYang, ekubeni loo ndoda ingengotata kaLu Lu Lu, kutheni eyazi ukuba kwenzeke ntoni kum?” Igqwetha uYang lithe, “zindaba ezimbi ezi endifuna ukunixelela zona namhlanje. Isizathu sokuba le ndoda iyazi eyakho eyadlulayo kukuba ize kuwe ngokomyalelo kamama wakho wesibini. Ewe inkundla ayikholwanga ngamazwi akhe, ecinga ukuba uyaziphikisa okanye ugwetywe. Kodwa kuba ndiyazi ngomama wakho wesibini, ndiyakholelwa kwinto ayithethileyo. Kufanele ukuba inento yokwenza nomama wakho wesibini. "
U-Lu Xi waluma amazinyo: “Ngu Cui Xianzhen kwakhona! Ukuba elo xhegwazana alindinyanzeli ukuba ndife, kubonakala ngathi alizukuncama. "
Igqwetha uYang uthe: “Lu Xi, sonke siyazi ukuba unjalo. Musa ukuba nomsindo ngenxa yakhe. Ngayiphi na imeko, okoko nje sifumana indoda yonyaka, ukuba nje siyayivumela le ndoda ukuba iyalile loo nto, emva koko singavumela umthetho ukuba umohlwaye. "
U-Lu Xi waluma umlomo: “igqwetha uYang…”
Igqwetha uYang: "ukuba unento, yitsho nje."
U-Lu Xi uphefumle umoya opholileyo wathi: “Kutshanje, bendixoxiwe kwi-Intanethi malunga nomntwana wam wokuqala ongatshatanga ndiyamoyika ...
Wayesoyikela ukuba iziganeko zaloo nyaka ziyakukhankanywa, inyani enegazi yayiza kunyathelwa kwi-Intanethi, kwaye uLu Lu wayeza kuphinda enzakaliswe ngenxa yenkani yakhe Uyoyika izinto ezininzi, kodwa akakwazi ukuxelela abantu . Mnye kuphela umntu entliziyweni yakhe.
Igqwetha uYang uthe: “Lu Xi, ungakhathazeki kakhulu ngale nto. Ngoku abantu ababesazi ukuba ayinguwe wedwa kunye nam, kodwa nonyoko. Ukwafuna ukufumana izibonelelo ezivela kuwe, kodwa akazazisanga kubo bonke. "
Igqwetha uYang ebengazi ukuba sele ebukrazule ubuso bakhe noCui Xianzhen. Nje ukuba angafumani zibonelelo kuye, umfazi okhohlakeleyo kaCui Xianzhen wayenokwenza nantoni na. Nangona kunjalo, wayengasenguye la Lucy, kodwa esenzakaliswa ngulo mfazi ukhohlakeleyo.
I-Tingjie inikela ingxelo kuQin Yinjian: "UMongameli uQin, indoda eyaphanga uLu Xi ngaloo mini igwetyelwe."
UQin Yin wanqwala, "kulungile."
U-Antinger wongeze wathi: “Isizathu sokuba umntu avume ukubanengxaki yokufumana uLu Xi kukuba wayefundiswe ngumama wesibini ka-Lu Xi. Khange aphange uLu Xi, kodwa weza endaweni yakhe njengotata kaLu Lu. "
UQin Yin uphakamise amashiya akhe wathi, "ukubuyisela utata kaLu Lu ngegama elingelilo?"
U-Lu Xi uthe utata ka-Lu Lu Lu ubhubhile.
Ukuba ifile nyani, bekutheni ze kufike umntu ozothatha indawo katata ka Lu Lu?
Ngaphezu koko, uLu Xi akazi ukuba ngubani utata kaLu Lu Lu, njani ukuba umntu abe sisidenge kangangokuba atshintshwe ngumkhohlisi.
Ngaba uLu Xi akanalwazi lokuba ngubani utata kaLu Lu, ke waxoka esithi lomntu ufile?
Kuba ucinga ngale nto, uQin Yin wacinga ngeli xesha kwiminyaka embalwa edlulileyo Ingaba…
Ukuba ngelo xesha, uLu wayeneminyaka emithathu ubudala eneenyanga ezisixhenxe ubudala.
Nangona kunjalo, ngala mhla uLu Xi waxelela uLele ukuba uLu Lu wayeneminyaka emithathu eneenyanga ezintlanu, umahluko wexesha iinyanga ezimbini.
Intliziyo kaQin Yinjian, ebibila ucinga ukuba inokwenzeka, yaphola ngokuthe chu ngenxa yenyani: "thumela umntu ukuba abeke iso kumama wesibini kaLu Xi."
U-Antinger: “Ndiza kwazisa abantu endisebenza nabo eMelika ngamalungiselelo.”
U-Qin Yin wanyusa kwaye watyikitya ukuba i-antinger ingahamba.
Akuba emkile, uQin Yin wajika intloko wajonga ngaphandle kwefestile. Into awayeyibona yayisisiXeko saseJiangbei, kodwa into awayecinga ukuba yinto malunga noLu Xi. Uncumo, umsindo wakhe, yonke into yakhe
Ukuba umntwana wakhe uLu uL uneminyaka emithathu ubudala kwaye uneenyanga ezisixhenxe ubudala. Kutheni kufuneka eneenyanga ezimbini emncinci?
Iintsuku ezingama-XNUMX, iintsuku ezingamashumi amabini zidlulile. UQin Yinyi akasaphinde avele phambi kukaLu Xi, kwaye noLeLe akazanga esibhedlele ukuza kukhapha uLu Lu Lu ngenxa yokunyanzelwa kukaLu Xi ngala mini. Nditsho nokuphazamiseka kwi-Intanethi malunga nomfazi ka-Sheng Tian, ​​umlingane wokuqala ka-Lu Xi, ukuzala kwakhe umntwana kuye kwancipha, kwaye ingqalelo yabanomdla kwi-intanethi itsaliwe zizinto ezintsha.
, kwaye akukho mntu uthathela ingqalelo uLu Xi kwakhona.
Ubomi bukaLucie babunoxolo njengokuba babunjalo ngaphambili, njengoko babungazange bunjalo ngaphambili
Ngemihla yakuqala, intliziyo kaLu Xi yayinokulindela ukuba uQin Yingu ngamanye amaxesha atyelele umama nonyana wabo esibhedlele, kodwa ngokuya iintsuku zihamba, olu lindelo lwalufihlwe ngononophelo entliziyweni kaLu Xi, lungaze lukhunjulwe. Ngaphambi kokuba yenzeke loo nto, wayekulungele ukuba uQin Yinjian ahlukane naye nangaliphi na ixesha, kodwa akazange acinge ukuba xa wayekude kakhulu kuye ngenxa yesi sehlo, wayeya kuhlala elusizi emva kwayo yonke loo nto, yile ndoda wayeyikhe nyani uthandile, indoda afuna ukuhlala nayo ubomi bonke.
Kuphela nje ukuba kuphelile
U-Lu Lu ugqibile ukumfakela, kwaye udadewabo omncinci womongikazi uthatha inaliti ngasemva kwesandla sakhe: “Lu omncinci, xa udade wethu ekubetha, awulili. Ungumntwana okhaliphileyo endakha ndambona. Uxelela udadewethu, kutheni ulunge kangaka? "
Wanconywa ngudade wabo mhle, uLu Lu egalela iigusha ezingalweni zikaLu Xi. Ilizwi lakhe elithantamisayo liyakhwaza, "Mama…"
U-Lu Xi ubambe umzimba omncinci womfo, wathambisa intloko yakhe encinci, wancuma wamkhuthaza: “nyana, udadewethu uyakudumisa. Ukuba ufuna ukuthetha nantoni na, ungayithetha ngesibindi. Musa ukuba neentloni. ”
Ngenxa yezizathu ezininzi, u-Lu Lu unovelwano kwaye unengqondo, ayilunganga kakhulu ekunxibelelaneni nabantu ongabaziyo. Uhlala ebukele abantu angabaziyo. Ngokombono wakhe, nabani na obonakala kufutshane nonina nonyana wakhe unokuba ngunina. Ke, unamagama ambalwa kunye nomongikazi omkhathalelayo.
U-Lu Lu ujonge u-X Xi, uphinde wajonga udade wabo ongumongikazi emva kokuba u-Lu Xi ekhuthaze amehlo akhe, kwaye uphendula umbuzo wakhe ngokunzulu: “kuba u-Lu Lu uyinkwenkwana, amakhwenkwe awanakukhala iinyembezi ngokulula, u-Lu Lu akafuni mama. ukuzikhathaza ngayo. ”
“U Lu Lu usemncinci uzokucinga ngomama wakhe. Kumnandi kakhulu, ”watsho umongikazi
Uphinde wathula u Lu Lu. U-Lu Xi umkhokela ngomonde: "Lu Lu, ingaba uMama ukuxelele ukuba abantwana mabachubeke?"
U-Lu Xi wabuza kwakhona, “laa ntombazana incomileyo iyakuncoma, kufuneka wenze ntoni?”
U-Lu Lu akalunganga kakhulu ekunxibelelaneni nabantu angabaziyo, kodwa ukuze angamenzi buhlungu uMama, wathi, "enkosi dade."
“Lu Lu, sukuba nembeko kudadewethu, kuba ungumntwana olungileyo.” Udade omncinci womongikazi uthe xa eqokelela ingxowa yokumnika, “Nkosazana Lu Xi, namhlanje ukumiliselwa kolwelo kukaLu Lu Lu kugqityiwe. Makaphumle ngorhatya. Nceda usitsalele umnxeba xa unento ngexesha. ”
"Kulungile." U-Lu Xi ukhupha udadewabo omncinci womongikazi ukumsa endlwini. Ufuna nokubuza ngemeko ka Lu Lu. Ngequbuliso, kuthi gqi umntu obhinqileyo egxalathelana ukuza kuye, emanga uLu Xi kwaye ekhala, "Mntwana wam, umama kudala ekufuna, ekugqibeleni ukufumene."
“Uyeke!” U-Lu Xi ufuna ukutyhala umfazi otyebileyo ombambayo, kodwa ngenxa yokuba iqabane lakhe likhulu kakhulu kunaye, uzama ngandlela zonke ukuba angamtyhaleli kude, nto leyo emenza abe nomsindo. “Cui Xianzhen, ndifuna ukuba uyeke, usisithulu?”
Lo mfazi nguCui Xianzhen, umama wesibini ka-Lu Xi.
Ndicinga ukuba uCui Xianzhen wayeyintombazana entle enesimo esihle nembonakalo entle xa wayemncinci ukurhwebesha utata kaLu Xi. Emva kwexesha, waphumelela ekubeni ngumamkeli-zindwendwe wosapho lakwaLu. Intliziyo yakhe ekhohlakeleyo yatyhila ngokuthe ngcembe. Unyaka nonyaka wayesiba mbi, ngokungqinelana nentetho yabadala. UCui Xianzhen wangana noLu Xi walila wangxolisa: “Umama uyazi ukuba makangakunqandi ukuba ube nale ndoda uyithandayo, kodwa mjonge, uzokukhapha xa engena ebhedini, akunike baby before utshate Masingathethi ngayo yonke lento. Into ebalulekileyo kukuba kufuneka usebenze nzima ukwandisa umntwana wakho. Akakhathali nangoku. Mntwana, umama akakuvumeli ukuba ufumane indoda, kodwa ndiyathemba ukuba ungayifumana indoda ekuphatha ngokunyanisekileyo. Uyaqonda? "
Eli xhegwazana lixoki uLu Xi lalinomsindo kangangokuba laphakamisa inyawo laza lanyathela kwinqanaba likaCui Xianzhen: “Cui Xianzhen, susa izandla zakho ezimdaka ungandibambi. Kwaye sukusebenza apha. Yintoni ukusetyenziswa kokusebenza kakuhle? "
"Ndiyadlala, ngokwendalo ndenzela abantu endifuna ukubabona." Iimbadada zikaCui Xianzhen zaziphantse ze ngasemva konyawo lwakhe. Kubuhlungu xa uLu Xi wabanyathela kabuhlungu. Uye wamyeka u-X Xi wasuka kwiintlungu zakhe, kodwa ebesakhumbula ukuthoba intloko kwaye ehlebeza into ethile endlebeni kaLu Xi.
UCui Xianzhen uthethe oku kuLu Xi yedwa. Emva kwexesha, wenzele abanye: “Ntombi, kutheni le nto usanenkani? Ikwangumama. Kuya kufuneka uqonde ukuba umama ukhathazeka njani ngabantwana bakhe. "
“Bah…” uLu Xi uyithiyile into yokutshica eCui Xianzhen. Ukhomba umnyango aze agqume, “phuma! Phuma apha ngoku, kwaye ungaphinde ubonakale phambi kwam ukuze undonyanye. "
Angabakho njani umfazi ongenazintloni ehlabathini? Wenze izinto ezininzi eziphambeneyo kule minyaka idlulileyo. Ngoku ukhwaza nentombi yakhe. Abantu abangazi ngenene bacinga ukuba ngumama wakhe kwaye intombi yakhe ayiqhelekanga.
Njengoko bekulindelwe, bonke abadlulayo beme kwaye baqala ukubabonisa.
Abanye abantu bathi, “jonga wena. Lihla ngokwenene ehlabathini. ”
Abanye abantu bathi: “Umama umkhathalele, kodwa umphatha ngoluhlobo. Angathini umntu onje ukuhlala enobuso bokuphila emhlabeni asweleke nje? ”
Ingxoxo embi ayivakali. U-Lu Xi wabona ikratshi emehlweni ka-Cui Xianzhen. Xa uCui Xianzhen efika apha, wayefuna ukubona umphumo. Kwixesha elidlulileyo, uCui Xianzhen wanyanzela umama kaLu Xi ukuba ahambe ngendlela efanayo.
Phambi kokuba umama alahlekelwe, ngoku uLu Xi angayenza njani into yokuba uCui Xianzhen onwabe kwakhona.
U-Lu Xi ujike intloko wajonga abantu abadlulayo: “wazi ntoni? Ndixelele, wazi ntoni? "
Umntu odlulayo: “…”
U-Lu Xi uthe ngokuhlekisa, “ngoku, khange sibe nengxoxo eshushu. Ngoku ndifuna ukuthi kutheni ungatsho? ”
Umntu obedlula ngendlela urhoxile wathi, “Ndiyaxolisa.” ULu Xi wongeze wathi, “awazi kwanto. Ukuvela nje kwindawo ozibonileyo nje, ume kwelona nqanaba liphezulu lokuziphatha kwaye usola abanye. Ngubani okunike eli gunya? ”? Uyazi ukuba bangaphi abantu emhlabeni abathe basweleka ngenye imini ngenxa yezityholo zabantu abazilungisa njengawe abangayaziyo inyaniso? "
Ihlabathi liyayazi indlela olubi ngayo uluvo loluntu emntwini. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu lusava ezinye iindaba ezingazi ukuba ziyinyani na okanye asiyonyani, ke ngoko balandela imeko yengxoxo kwaye bagxeke abanye kwezona ndawo ziphakamileyo zoluvo loluntu. Ngokombono kaLu Xi, olu hlobo lwetalente ngoyena mntu unenzondo. Kungenxa yokuxhokonxa aba bantu ukuba umama wakhe wazibulala ngenxa yoxinzelelo.
UCui Xianzhen uyawazi amandla oluntu. Njengomntu omncinci ngaloo nyaka, wathatha inyathelo lokuvumela abo bantu babengayazi inyani beme ecaleni lakhe bamncede aphelise abachasi bakhe. UCui Xianzhen ubungcamle ubumnandi beli candelo, kwaye ngoku uzama ukwenza okufanayo kuLu Xi.
Ukwazi ubuqhophololo bukaCui Xianzhen, uLu Xi angavumela njani uCui Xianzhen aphumelele.
Xa abantu ababelapho babengenakuthetha, uLucy wakhomba kwaba bantu balandelayo wabajonga ngomsindo wathi, “yintoni enye oyibonayo? Uyazi ukuba kwenzeka ntoni? "
Abantu abadlulayo khange babone kwanto, kuba bemamele abantu abaphambi kwabo, ke bona bazimanya nabo bakhomba uLucy. Ngoku uLucy wabakhomba, kwaye babengenakuthetha, kuba babengazi nto kwaphela.
Uqhubile u-Lu Xi ngokuhlekisa: “khange ubone kwanto, kuba abantu abaphambi kwakho batshilo, kwaye nawe ulandele umoya. Balandeli, umama wenu uninike ingqondo yokucinga ngezinto, hayi ukulandela. Awuqondi na? "
Nangona abantu besitsho, abonwabanga, kodwa le nto ithethwe nguLu Xi yinyani, abanakukufumana ukuphikwa. Ukubona uLu Xi ethetha ngqwabalala esithi “abancedisi” bakhe bayafana nebhola yegesi, uCui Xianzhen akazimiselanga ukubonisa ukuba amehlo akhe ayaqhwanyaza kwaye iinyembezi ziyawa emehlweni akhe: “Xiao Xi, andifuni kwazi kakhulu, Ndiyathemba nje ukuba intombi yam ayizukuqhathwa. Ndiyathemba ukuba intombi yam, njengabanye abantwana, iya kuba nosapho olonwabileyo, kunokuba ibe nabantwana ngaphambi komtshato. Xa kuzalwa umntwana, utata womntwana akazi ukuba aye phi. "
“Ngubani oxelele utata womntwana wakho ukuba uye phi?”
Ilizwi elibandayo kodwa eliqinileyo nelinamandla kwavakala ngokungxama emva kwesihlwele, esenza abantu bajonga ngasemva. Babona indoda ende, eyinzwakazi, ime phambi komntu, kodwa ngokuba ebemde kunabanye, bayibona imana isangqa sayo.
Ngubani umntu oluhle kwaye unamandla? Kutheni le nto aboniswe apha ngephanyazo?
Ngapha koko, ukuba ngubani yena ayinanto yakwenza nabathengi be-melon, kodwa eyona nto iphantsi ebantwini kukuthanda ukubukela nokungena.
Ewe kunjalo, ayizange nje kuphela abantu bayibone le ndoda, kodwa noLu Xi. Kodwa wayesazi ukuba ingubani indoda xa yayisiva izwi. Usweleke nje iintsuku ezingama-20, kuQin Yinjian, awayecinga ukuba akazukuvela phambi kwakhe kwakhona.
Unombuzo ofanayo neminye, angabonakala njani ngesiquphe apha?
U-Lu Xi wayengasiqondi isizathu sokuba u-Qin Yingu avele ngequbuliso apha, kodwa inye into awayeyazi kakuhle. Nokuba kunjani na ngaphambili okanye ngoku, okoko emdinga, uya kuvela ecaleni kwakhe okokuqala.
Ngamaxesha amaninzi, uLu Xi wayenokucinga ukuba uQin Yinjian yayinguye lowo wayesazi ngaloo mihla
UQin Yin wajonga bonke abantu engakhange azichaze, emva koko wathi kumlawuli owayesandula ukufika: “Mlawuli, isibhedlele saseShengtian saba nini kwintengiso yemifuno? Zeziphi iindawo ezinokungena kuzo izinja neekati ngokuthanda kwazo? "
UMongameli wosule ukubila okubandayo: “UMongameli uQin uthe asikhathali emsebenzini wezokhuseleko. Ndiza kunikela ingqalelo kuyo kwixa elizayo. ”
UQin Yinjian: “hayi kwixesha elizayo, kodwa ngoku. Andifuni kubona abantu abangabalulekanga bevela kwindawo yewadi ephezulu ukuba bachaphazele imeko yonyango losapho lwam. "
UMlawuli wanqwala: “ewe…”
Ngeli xesha, uCui Xianzhen ngequbuliso wagijimela kwicala likaQin Yinjian esihlweleni: “umkhwenyana umkhwenyana ndiza kukhululeka xa unikezela ngethemba lethu elincinci kum. ”UCui Xianzhen akambonanga uQin Yinjian ngokwakhe, kwaye usapho lakwaQin belusoloko luzigcina luphantsi. Iifoto zikaQin Yinjian azikaze zikhutshwe eluntwini, kwaye nkqu nenkomfa yakhe yeendaba inelizwi lakhe kuphela, kodwa uCui Xianzhen yindoda enamandla okujonga, ngubani onokuba nomoya oqinileyo
, kwaye isazisi sakhe ngokuqinisekileyo asiphantsi. Ngapha koko, igosa lesibhedlele linqwala nje laza lahlaba igama laza lahlaba ikhonkco. Waye wabiza uMongameli u-Qin, u-Cui Xianzhen unokuqiniseka ukuba le ndoda yiNkosi ye-Lu ka-Lu Xi, kwaye nayo ebefuna ukumenzela yona. Ayifumananga thuba lokwenza.
Abantu ebehlala efuna ukwenza inzame omnye komnye baye kuye. UCui Xianzhen angaliyeka njani ithuba aze akhwaze kumkhwenyana wakhe, ngokungathi uQin Yinjian ngumkhwenyana wakhe.
Kodwa uQin Yin akazange anike elixhegwazana ubuso. Khange ajonge kwaCui Xianzhen: “Dean, ulinde ntoni?” Umongameli akazange alugaye utshintsho olukhawulezileyo. Ngoku ukhwazwa nguQin Yinjian. Umongameli wothukile. Akazi ukuba uQin Yinjian ufuna ukuba enze ntoni. Kanye xa engazi ukuba angayenza njani, uLu Xi uyaphuma amtsale: “Mongameli, eli bhinqa lilapha ukuza kwenza ingxaki. Asimazi tu. Kufuneka umkhuphe apha. Emva kwexesha sukumvumela ukuba angene kwisango lesibhedlele inyathelo elinye. Hayi, kungcono ufumane indlela yokumgcina kude nesibhedlele. Ukubona umfazi ongenazintloni onjalo kuya kwenza abantu bangakwazi ukutya iintsuku ezininzi. "
UMlawuli wanqwala ngentloko, "ewe, ndizakubarhuqa abantu." UCui Xianzhen wamamela amazwi kaLu Xi kwaye wawagcina engqondweni. Ngoku kukho abantu abakufutshane noLu Xi, kwaye akakwazi kumhambisa uLu Xi. Kodwa ngokuqinisekileyo uyikhumbula le ntiyo. Okwangoku, kusafuneka aqhubeke nokudlala umama onothando: “ntombi, mkhwenyana, ndiyazi ukuba unoluvo ngam, kodwa ayinamsebenzi. Ndiyakholelwa ukuba ngenye imini niyakufuna ukuqonda kwaye nazi ukuba yonke into endiyenzayo yenzelwa nina nobabini Unjani wena? "
“Msuse,” watsho uLucy engenamonde
Nangona uCui Xianzhen ethathwe ngabanye, uLu Xi wayesazi ukuba lo mba awunakuba lula ukuphela. Kuba uCui Xianzhen ngumfazi oye weza eJiangbei kwaye akenzi ngxaki, soze anikezele. Mhlawumbi uzakutshintsha utata wakhe ayodlala ngomso.
Ah - ngalo lonke ixesha usapho lakwaLu lufuna ukufumana izibonelelo kuye, baya kuza badlale ikhadi lothando kuye, besithi ukhule etya irayisi yosapho lakwaLu, kwaye nosapho lukaLu lwamnika isikolo, njl njl. ukuba ezi ziyinyani, kodwa akufuneki balibale ukuba ukusweleka kukanina, ngababulali abangathanga ngqo, nabo bacinga ukuba unemizwa ngabo.
Bhalisa kwaye usincede ukuzisa imixholo engaphezulu
iindidi Inveli tags free, Inveli, PDF Post yokukhangela
Umyeni wam uyafudumala Ibhedi Isahluko 1441 - 1460 UkuFunda simahla kwi-Intanethi